မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: January 2008
ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးဋ္ဌကီးရဲ့နောက်ဆုံးပေၞယုတာ
ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးဋ္ဌကီးရဲ့နောက်ဆုံးပေၞယုတာမိုးမခ စာဖတ်သူ (ရန်ကုန်)ဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သူ့ ရဲ့လက်စြဲတော် ဗေဒင်ဆရာရဲ့တက်ြခဵက်မြေုကာင့် ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးဋ္ဌကီး သန်းရေတြစ်ယောက် သူႚရဲ့ကဵဆင်းလာတဲု့သဇာအာဏာနဲႚူပည်တငြ်ိးိုံင်ငံရေး မူငိမ်သက်မမြဵားကိုေူဖရငြ်းဖို့နောက်ဆုံးပေၞ ယုတာတခုကို ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ဋ္ဌကြိးစားနေပၝတယ်။ အဲဒီယုတာကတော့ နေူပည်တော်မြာ ပင်ဂငြ်းငက်ြမြေးဖိုႚူဖစ်ူပီး ဒီစစ်ဆင်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖိုႚ Supreme သောက်ရေသန်ႚကို ပင်ဂငြ်းနေထိုင်ရန် အအေးခန်းဆောက်လုပ်ဖိုႚ တာဝန်ပေးလိုက်တာေုကာင့် ကုမဍ္ဎဏီတာဝန်ရြိသူမဵား ခေၝင်းနားပန်းဋ္ဌကီးနေတယ်လိုႚ Supreme ၀န်ထမ်းတဦးက ထုတ်ဖော်ေူပာုကား လိုက်ပၝတယ်။
Reactions: အမေရိကန်မြ ဒုက္ခသည် စကဿာပူ လာမလည်ရ
အမေရိကန်မြ ဒုက္ခသည်ိံငြ့် ဂရင်းကတ်ခရီးသြားလက်မတ်ြကိုင်ဆောင်သူမဵားကိုစကဿာပူက လက်မခံတော့မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်ိုံင်ငံကူးလက်မတြ် သိုႚမဟုတ် မိခင်ိုိံင်ငံ၏ သက်တမ်းရြိုံင်ငံကုးလက်မတြ် ကိုင်ဆောင်သူမဵားသာ စကဿာပိူိုံင်ငံတငြ်းသိုႚ ၀င်ရောက်ခငြ့်ူပတြော့မည်ူဖစ်ေုကာင်း စကဿာပူ ဗီဇိာံငြ့် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးက ရုတ်တရက်ေုကညာခဵက် ထုတ်လိုက်သည်ဟု ခရီးသြားရန်ူပင်ဆင်နေသည့်ူမန်မာဒုက္ခသည် တဦးက အေုကာင်ုးကားလာသည်။ "ကဵနော်ကိုံင်ငံရေးဒုက္ခသည်၊ မိခင်ိုံင်ငံက ဘာ ပတ်စ်ပိုႚမလြည်း မရြိဘူး။ အမေရိကန်ိုံင်ငံသားလည်း မဟုတ်ဘူး။ အမေရိကန်အစိုးရက ထုတ်ပေးတဲ့ ဒုက္ခသည် ခရီးသြားလက်မတ်ြပဲ ရြိတယ်။ တူခားတယောက်က အူမဲတမ်းနေထိုင်ခငြ့်ရထားတော့ ဂရင်းကဒ် ခရီးသြားလက်မတ်ြရြိတယ်။ိံစ်ြယောက်လုံးကို စကဿာပူ ဗီဇာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကူငင်းလိုက်တယ်။ိုံင်ငံသားတယောက်ရဲႚိုံင်ငံကူးလက်မတြ် မရြိရင် သူႚတိုင်ူးပည်လာစရာ မလိုပၝဘူး ... တဲ့။ အဲလိုေူပာလိုက်တယ်ဗဵ။" ၎င်းက မိုးမခသိုႚ ဖုံူးဖင့်ေူပာုကားပၝသည်။ မိုးမခက ဆန်ဖရန်စင်္စကို ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသိုႚ ဆက်သယ်ြမေူးမန်းရာ အထက်ပၝအခဵက်ကို အတည်ူပြေူဖုကားလိုက်ူပီး၊ိုံင်ငံကူးလက်မတြ် မရြိသူမဵားအတကြ် အူခားအစီအစဉ်မရြိေုကာင်း၊ အမေရိကန်ိုံင်ငံကူး လက်မတ်ြမရြိပၝကူမန်မာူပည်မြိုံင်ငံကူးလက်မတ်ြကို ယူဆောင်လာရန်လိုေုကာင်းေူပာုကားသည်။ူပန်စရာ မိခင်ိုံင်ငံမရြိသူဖင့် အစိုးရတရပ်က ထုတ်ပေးထားသော ခရီးသြားလက်မတြ်ိံငြ့် သြားလာလည်ပတ်ူခင်းကို စကဿာပူက ယခင်ကတည်းက ခငြ့်ူပထြားခဲူ့ပီးမြ၊ ယခု ၂၀၀၈ိံစ်ြဆန်းအတငြ်း ပေၞလစီေူပာင်းသြားရူခင်းအပေၞ မေးခနြ်းထုတ်ခဲ့ရာူပန်လည်ေူဖုကာူးခင်း မူပဘြဲ၊ိုံင်ငံကူးလက်မတ်ြသာ ယူလာရန်ေူပာုကာူးပီး၊ စကဿာပူ အစိုးရ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံမဵားတငြ် လာမည့် ၂ ရက် ၃ ရက်အတငြ်း သတင်းထုတ်ူပန်မည်ူဖစ်ေုကာင်းေူပာဆိုပၝသည်။ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုရြိ ဥပဒေအကဵြိးဆောင်အဖြဲႚတခုသိုႚ မိုးမခက အလတ်ြသဘော မေူးမန်ုးကည့်ရာ ၎င်းတိုႚကေူပာုကားရာတငြ် အာရြ၊ အာဖရိကိံငြ့် တောင်အမေရိကတိုက်ကိုံင်ငံရေးဒုက္ခသည်မဵားသည် တတိယိုံင်ငံတခုခုက ထုတ်ပေးသော တရားဝင်ခရီးသြားလက်မတ်ြမဵာူးဖင့် ခရီးသြား ကူးလူးလဵက်ရြိသည်မြာ မထူးဆန်းတော့ေုကာင်း၊ သိုႚသော်လည်း တရုတ်ိုံင်ငံအပၝအ၀င်၊ ယခု စကဿာပူကဲ့သိုႚ သီူးခားစိစစ်သည့် မူဝၝဒကဵင့်သုံးသည့် တိုင်ူးပည်မဵားလည်း ရြိနေပၝေုကာင်း၊ အရြေႚတောင်အာရြိုံင်ငံမဵားတငြ်ိုံင်ငံရေး၊ စီးပြားရေး၊ လူမရြေိးံငြ့် ပတ်သက်ူပီး လုံခြံမြိံငြ့် တည်ူငိမ်မြ မရြိသေးသည့်သဘောကိုပသသည့်သက်သေတခုအူဖစ် စဉ်းစာိးိုံင်ေုကာင်းေူပာုကားသြားပၝသည်။
Reactions: ဇင်ဝေသော် - သာသနမောဠိသိုႚ
သာသနာမောဠိ သို့ သစ္စာစကားဇင်ဝေသော် ( အေ၊ အို၊ အေ၊ ဘီ )ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ “ချစ်သားတို့ စိမ်းညို့ မို့မောက်နေသည့်တောအုပ်ကို ကြည့် လိုက်ကြ။ ထိုတောအုပ်ကို ပုစဉ်းရင်ကွဲတို့၏ တေးဟစ်ဆိုသံ တွေဖြင့်စိုးအုပ်ထားတန်ရာ၏ ။ ထိုအခိုက် အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော စစ်တပ်ချီလာ၏ ။ ထိုအခိုက် စစ်တပ်၏ ဆင်သံ ၊ မြင်းသံ ၊ တံပိုးခရာသံတို့ကြောင့် ပုစဉ်းရင်ကွဲ တို့ အသံသည် တဒင်္ဂတိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက် သွားတန်ရာ၏ ။ သို့သော် ထိုစစ်တပ်တို့ အသံများ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် သွားရာ၌ ထိုတောအုပ်သည် ပုစဉ်းရင်ကွဲတို့ အသံဖြင့် တဖန် မင်းမူစိုးအုပ်လေရာ၏ ။ အကြောင်းမူ စစ်တပ်၏ အသံသည် တောအုပ် ၏ ထာဝရအရှိတရား မဟုတ်ပဲ ပုစဉ်းရင်ကွဲတို့၏ အသံသည်သာ တောအုပ်၏ထာဝရ အရှိတရားများ ဖြစ်ကြသောကြောင့်ပင်တည်း ။ ” (ဗုဒ္ဓ ၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ) ငါတို့နိုင်ငံ၌ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော စဉ်းရင်ကွဲတို့အသံသည် စိုးအုပ် လွှမ်းမိုး ထားရာ၏ ။ ထိုအခိုက် မဆလ ၊ န၀တ ၊ နအဖ ဟူသောစစ်တပ်ချီလာပြီး ငါတို့တောအုပ်ကို ခွေးအူသံ ၊ လူအူသံ ၊ သေနတ်သံ တို့ဖြင့်စိုးအုပ်ထား လေပြန်ရာ၏ ။ သို့သော် ထိုအူသံအမျိုးမျိုး ဆိတ်သုန်းပြီးလွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှု ဆိုသော ငါတို့ စဉ်းရင်ကွဲကြွေးကြော်သံသည် တဖန်ပြန်၍ မင်းမူရာ၏ ။ အကြောင်းမူ ထိုအူသံတို့သည် တို့တောအုပ်၏ ထာဝရအရှိတရား များမဟုတ်ပဲ ငါတို့၏ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ပုဇင်းရင်ကွဲ တို့အသံသည်သာ တို့တောအုပ်၏ ထာဝရအရှိတရား များဖြစ်ကြသောကြောင့် ပင်တည်း ။ တောအုပ်တစ်ခု၏ နှလုံးသားသည် လွပ်လပ်မျှတမှုတည်း ။ ဒီနေ့ သာသနာမောဠိ ရဲ့ သစ္စာမြှားဦးဟာ နအဖ ရဲ့ရင်ညွန့်ဦးဆီကို တည့်တည့်ကြီးချိန် ထားပြီးပါပြီ။ ဒီအတွက် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်ခုပ်သံတွေလိုတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ လက်ဖျံရိုးနဲ့ ၊ လက်မောင်းကြွက်သား တွေလိုတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ချွေးနဲ့ ၊ ချွေးနဲစာတွေလိုမယ် ။ ဒီတောအုပ်ကို ပုစဉ်းရင်ကွဲသံတွေနဲ့ စိုးအုပ်စေချင်ရင် ခင်ဗျားတတ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုခုကိုတော့ ပေးဆပ်ထားခဲ့ပါ ။ စစ်တပ်ကိုလွှမ်းအုပ်ဖို့ ပုစဉ်းရင်ကွဲတို့ တေးသီချင်းစဆိုနေပါပြီ ။“ ချစ်သားတို့ … ဖြူ၊ နီ၊ ပြာ၊ ၀ါသော ပန်းတို့သည် မြေပြင်၌ ကစဉ့်ကလျား အိပ်စက် လဲလျောင်းနေရာ၏ ။ ထိုအခါ ကျွမ်းကျင်လှစွာသော ပန်းကုံးသမားသည် ခိုင်မာသော ပန်းသီတံဖြင့် တစ်ပွင့်စီ ပြန့်ကျဲနေသော ပန်းရောင်စုံတို့ကို အနုပညာမြောက်မြောက် သီကုံးလေရာ၏ ။ ထို့ကြောင့် ထိုအကြွေပန်းတို့သည် တော်ဝင်သောပန်းကုံး တစ်ကုံး ဖြစ်သွားလေရာ၏ ။ ” ( ဗုဒ္ဓ ၊ ဓမ္မပဒ ၊ ပုပ္ဖ၀ဂ် ) ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာတွေ ကွဲ ပြဲနေကြသလား ၊ ဟင့်အင်း … ကွဲ ပြဲမနေကြပါဘူး ။ ဒါဆို စည်းလုံး ညီညွတ် နေကြပါသလား၊ ဒီလိုလည်း စည်းလုံးညီညွတ် မနေကြပါဘူး ။ ဒါဆို ဘာလဲ၊ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီ ရောင်စုံပန်းပွင့်တွေကို သီကုံးဖို့ ကြိုးတချောင်းနဲ့ ပန်းသီမယ့် လက်ဖ၀ါးတစုံ အလိုရှိနေတာပါ။ သာသနာ့မောဠိဆိုတာ ပန်းသီိတဲ့ကြိုး၊ ပန်းသီိတဲ့လက်ဖ၀ါးပါပဲ။ ကြိုးက မလှပသလို၊ ပန်းသီမယ့် လက်ကလည်း ပန်းလောက် မလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကြိုးနဲ့ လက်ဖ၀ါးတစုံဟာ ရောင်စုံ လှပတဲ့ ပန်းတကုံးဖြစ်ဖို့တော့ ရာနှုန်းပြည့် တာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျားတို့နှလုံးသားကို ပန်းတပွင့်အဖြစ် ဖန်ဆင်းလိုက်ပါ။ ခင်ဗျားဟာ၊ ကျူပ်ဟာ၊ ဦးဂမ္ဘီရဟာ၊ မင်းကိုနိုင်ဟာ၊ ဖြူဖြူသင်းဟာ၊ စုစုနွေးဟာ၊ ကိုကိုကြီးဟာ ပန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်ခုပ်သံတွေ လိုတယ်။ ခင်ဗျားတို့ လက်ဖျံရိုးနဲ့ လက်မောင်းကြွက်သားတွေ လိုတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ ချွေးနဲ့ ချွေးနဲစာတွေ လိုမယ်။ (လိုတယ်လို့မပြောပါ ) “အစည်းပြေနေတဲ့ မြန်မာတွေအားလုံးကို ချီဖို့ ကြိုးတချောင်းလိုတယ်၊ အဲဒီကြိုးဟာ ဘာသာရေးဆိုတဲ့ ကြိုးပါပဲ ၊ဒါကို ဆရာတော်ကြီး နှစ်ပါးစလုံး( ဆရာတော် ဦးကောဝိဒါဘိဝံသနဲ့ ဆရာတော်ဦးပညာဝံသ) က ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ” ( ဆရာတော်ဦးဥတ္တရ ၊ မောဠိအဖွဲ့ချုပ် ၊ အတွင်းရေးမှုးဆရာတော် ) ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ယုံကြည်တဲ့ ပန်းသီတဲ့လက်ဟာ အရည်အချင်းရှိရမယ်၊ အတွေ့အကြုံရှိရမယ် ၊ အားလုံးထက်ခေါင်းတစ်လုံး ပိုမြင့်ပြီး အားလုံးထက် ကျော်မြင်နေရမယ် ၊ ရိုးသားရမယ် ၊ သစ္စာရှိရမယ် ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ တောက်လောင်နေရမယ် ၊ အစိမ်းရောင် ငွေစက္ကူကြောင့် မေ၀၀ါးရဘူး ၊ သေနတ်ပြောင်းဝနဲ့ ထောင်တံခါးကို ရင်ဘတ်ဖွင့်ပြီး ခံယူရဲရမယ် ။ လာပြီ။ သစ္စာရဲ့ မြှားဦး၊ ဂန္ထ၀င်မြောက်ပန်း တပွင့်လို့ ရင်ဖွင့်ကြိုဆိုကြပါ။ မောဠိဆိုတဲ့ ပါဠိစကားကိုသုံးပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေက စတင်ဖွဲ့စည်း သီကုံးခဲ့ပေမဲ့၊ မောဠိအောက်မှာ မြန်မာနဲ့ သွေးသားတော်စပ်တဲ့ အသိရှိတဲ့ လူသားတိုင်း၊ သစ္စာတရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားတိုင်း ပါဝင်တယ်။ Jesus ရဲ့တပည့်တွေ ပါတယ်။ တမန်တော်မိုဟာမက် စကား နားထောင်သူတွေပါတယ။ ဗုဒ္ဓရဲ့သားတပည့်တွေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မောဠိသီကုံးတဲ့ပန်းဟာ အရောင်စုံတယ်။ ဒါဆို မောဠိက ဘာလုပ်မှာလဲ ရွှေရောင်နဲ့ချီခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ လှပတဲ့ရွှေရောင်အနာဂတ်အတွက် ရွှေရောင်တွေက အဆုံးသတ်ဖို့ ကြိုးစားရမယ။ ဒါကို ဥသျှောင်ဆရာတော်တွေ ယုံကြည်ကြတယ်။ သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာကိုလည်း အရှင်မြတ်တွေက ယုံကြည်ထားကြတယ်။ “ ဦးဇင်းတို့ Target က ၂၀၀၈ ဖြစ်တယ် ၊ ၂၀၀၈ အတွင်းမှာ ပြီးဆုံးရမယ် ၊ ဒီအတွက်အားကောင်း မောင်းသန် အကူအညီတွေ ကမ္ဘာက ပေးကြလိမ့်မယ် ၊ ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ၁၀ ဆ တိုးပြီး အလုပ်လုပ်ရမယ် ” ( ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ ) ဒီစကားအတွက် သံသယရှိတဲ့ သတင်းထောက်က ပီနန်ဆရာတော်ကြီးကို မေးတယ်။ ဒီတော့ ဆရာတော်ကြီးက “ဦးဆောင်နေတဲ့ သူတွေကို ကြည့် …” လို့ ဖြေတော်မူလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ကြာရင် တိုင်းပြည်နာတယ်။ ရမ်ဘိုရဲ့ရုပ်ရှင် ကြော်ငြာသလိုပါပဲ။ Live For Nothing Or Die For Something. ကျနော်တို့ဖောင်တွေကို ဖျက်ထားခဲ့ပြီး မောဠိနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့ ။ “၂၀၀၈မှာ ပြီးဆုံးရမယ်လို့ ဘာကြောင့် ပြောနိုင်ရတာလဲ ဆိုရင်တော့၊ ပြောနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းတရား ရှိလို့ပေါ့။ တံခါးပိတ်စည်းဝေးခဲ့တဲ့ ဂျကာတာ၊ မဲဆောက် အစည်းအဝေးတွေကနေ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ အဖြေတွေ ရခဲ့ကြတယ်။ ဒါတွေကို ပြောပြလို့ မဖြစ်ပေမဲ့ အီးယူသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်နဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာ့တော်လှန်ရေးဟာ ၂၀၀၈ မှာ အောင်မြင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပြီးပါပြီ။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူ NGOအဖွဲ့တွေက လည်း ရာနှုန်းပြည့် ပံ့ပိုးပေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဦးဇင်းတို့ Targetဟာ ၂၀၀၈ လို့ ပြောရဲတာဖြစ်ပါတယ်။” ( ဦးဥတ္တရ ) န အ ဖ ကို လမ်းကြောင်းပေးသလို ဖြစ်နေမှာမို့ တံခါးပိတ်စည်းဝေးပွဲတွေရဲ့ ရလဒ်ကို ပြောမပြဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ကမ္ဘာက နအဖကို ၀ိုင်းထုဖို့ သဘောတူနေကြပြီးပြီဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တို့ သိလိုက်ရပါတယ်။ “လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဒီတော်လှန်ရေးဟာ ဘုန်းကြီးတွေဦးဆောင်မှ အောင်မြင်မယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ သံဃာတွေကို အကာအကွယ်ပေးရမယ်။ လိုအပ်ရင် လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ သံဃာတွေရဲ့လူထုတရားပွဲတွေ၊ စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်ကြရလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက်သံဃာတချို့ ကို Public Speaking သင်တန်းတွေ ပေးကြလိမ့်ဦးမယ်။” ဒါကတော့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တရဆီက အတွင်းကျကျ သတင်းတစ်ခု ပွင့်အံ လာတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ Gambari နဲ့ နအဖတို့ ရှေ့ခြေလှမ်း ဘယ်လောက် ရောက်နေပြီလဲ၊ Mr Gambari ရဲ့စကားကို နားထောင်ဖို့ ဟိုကောင်တွေမှာ နားရှိရဲ့လား၊ ဒါကို လုံခြုံရေး ကောင်စီကသိနေပြီ ။ Gambari ကိုလွှတ်မဲ့အစား မြန်မာသံဃာတချို့ကို တရားဝင်စကားပြောခိုင်းရင် ပိုထိရောက်လိမ့်မယ် ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ် ။ “ မဲဆောက်မှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရော၊ လက်နက်မကိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ သူတွေရော အားလုံးနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်၊ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်၊ အားလုံးဆီက ညီညွတ်မှုလည်း ရခဲ့ပါတယ် ။ ” ဒါက ဆရာတော် ဦးဥတ္တရရဲ့ မဲဆောက်၊ ဂျကာတာဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးမှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ “အား² ဟာလည်း ဒါပါပဲ ။ မောဠိက လိုကော လိုအပ်လို့ လား အသေအချာ လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ဆိုတာ ရှိပေမဲ့ ဒီအဖွဲ့ အစည်းဟာ ရာထူးဌာန န္တရ မက်မောခြင်း၊ ကမ္ဘာအခြေအနေကို မသိခြင်း၊ နအဖကို ဘာမှ ပြန်မပြောရဲအောင် ကြောက်ရွံခြင်းဆိုတဲ့ အ, ဂတိတရား သုံးပါးအောက်မှာ နလံမထူုနိုင်တော့ပါဘူး၊၊ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ထက် ဘာမှ လုပ်မရတဲ့ ရာထူးပြုတ်မှာကို ကာကွယ် နေကြပါတယ်၊၊ ဒီအချိန်မှာ လာဘ်လာဘမမက်မောတဲ့ ကမ္ဘာ့ရေစီးကြောင်းကိုသိတဲ့ အမှန်တရားအတွက် ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ မကြောက်တဲ့ သံဃာအဖွဲ့ အစည်း သေချာပေါက် လိုအပ်တယ်။ သံဃာ့မဟာနာယကဆိုတာ ရှိတယ် ဆိုစေဦးတော့၊ ပြည်ပသာသနာပြုတော်မူကြတဲ့ သံဃာတွေကို ဘာဆိုဘာမှ အကူအညီ အထောက်အပံ့ မပေးနိုင်ကြပါဘူး၊၊ ယုတ်စွအဆုံး အကြံဥာဏ်လေးတောင် မပေးနိုင်ကြပါဘူး၊၊ ဒီအချိန်မှာ ပြည်ပသာသနာပြု အတွေ့အကြုံ အနှစ် ငါးဆယ်ကျော်ရှိတဲ့ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးက လမ်းညွှန်ပေး၊ ဦးဆောင်မှုပေးလိုက်ပါတယ်၊၊ ဒီအဖွဲ့ဟာ နအဖ ရဲ့မူကို ဆန်ကျင့်တိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့၊ နအဖ ပြုတ်ကျသွားတဲ့နောက်မှာတောင် သာသနာထွန်းကားပြန်ပွားရေး၊ လူမျိုးအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီစောင့်ရှောက်ရေးတွေအတွက် တက်တက်ကြွကြွ ရှိနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သာသနမောဠိဆိုတာ အခြေအနေက ငတ်ငတ်မွတ်မွတ် တောင်းဆိုနေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ နောက်ပြီး ကမ္ဘာထိပ်သီး အစည်းအဝေးကြီးတွေမှာလည်း ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးအနေနဲ့ တူတူတန်တန်တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ဖိတ်ကြားတာခံရတယ်ဆိုတာ ဒီလိုစည်းလုံးမှုရဲ့ အကျိုးရလဒ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် သာသန မောဠိရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ နိုင်ငံရေးဆိုတာထက် အဆမတန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်၊၊ ပြည်ပသာသနာပြု ရဟန်းတော်အချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်သလို၊ တပါးရဲ့အခက်အခဲကို တပါးကနားလည်ပြီး၊ အတူအကွ ကူညီဖြေရှင်း၊ သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကို ဒီထက်မက အလုပ်လုပ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ မောဠိက လိုကော လိုအပ်လို့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေအကျဉ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ အခုတင်ပြမဲ့ ကိစ္စကတော့ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ အဖွဲ့ ရဲ့ မောဠိ အပေါ်မှာထားတဲ့ အိမ်မက်တွေပါ။ ၁။ ကမ္ဘာ့သာသနာပြု စာသင်သား ရဟန်းတော်များအားလုံး စုဝေးပြီး၊ သာသနာ့ညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေး ၂။ သာသနမောဠိကို ဌာနချုပ်အနေနဲ့အမေရိကန်မှာထားပြီး၊ အခြားဥရောပမောဠိ၊ အာရှမောဠိ အမေရိကမောဠိ ဆိုပြီး မောဠိအဖွဲ့ ခွဲများ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့ စည်းထားနိုင်ရေး ၃။ မောဠိနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်တာများကို E-Office မှတဆင့် ညွှန်ကြား စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေး၎။ သတင်းနဲ့ မီဒီယာကို ဒီထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောက်ရွက်နိုင်ရေး… ဆိုပြီး “Moli in our dream” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ထက် ကမ္ဘာအမြင် များစွာသာလွန်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးများဟာ သတင်းနဲ့ မီဒီယာကိစ္စကလွဲရင် အာလုံး စနစ်တကျ စီစဉ်ထားတော်မူကြပြီး ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြာခင်အတွင်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ညီလာခံကြီး ကျင်းပနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မောဠိ အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေဟာ အစဉ်အလာအရကိုပဲ သံဃာတော်တွေကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုနဲ့အတူ ဦးထိပ်တင်ထားကြပြီးသားပါ။ ဥက္ကဌဆယ်ခွန်း၊ ဘုန်းကြီးတခွန်းပါ၊၊ မောဠိ ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတခု မဟုတ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးမူဝါဒ ကွဲလွဲစရာမလိုပါဘူး။ မောဠိရဲ့ ဥသျှောင်ဆရာတော်ကြီးများဟာ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက်၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ကင်းရှင်းပြီး၊ လူထုရဲ့ ယုံကြည်အားကိုးမှုကို ရပါလိမ့်မယ်။ မောဠိရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူတွေရော၊ ဘာသာရေးတက်ကြွသူတွေပါ ပါဝင်ခိုလှုံလာကြပါလိမ့်မယ်။ မောဠိဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ နယ်နမိတ်ထဲမှာတင် မဟုတ်ဘဲ၊ လူမျိုးရေးပါ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မောဠိဟာ ပုဂ္ဂိုလ်သာကြည့်၊ ပေးသမျှအကြံ အကုန်ယူ၊ ပြောသမျှစကားကို နာခံမှာမဟုတ်တဲ့ အတွက်၊ ဒေါ်လာစား နိုင်ငံရေး စားဖားကြီးတွေရဲ့ ရုပ်သေးရုပ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေကို ထောက်ဆရင် မောဠိ ၆ လသား အရွယ်လောက် ရောက်ပြီဆိုရင်ပဲ၊ န အ ဖ ရင်တုန် ပန်းတုန် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ… ဒါတွေဟာ မောဠိရဲ့ ပန်းကြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မောဠိရဲ့ “ အား ” “မင်းရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေအားလုံးဟာ ငါ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်ကွာ” ဟု ပြေးမထွက်ခင် မြားတန်လေးကို လေးညှုိ့ကပြော၏။ “အေး….ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပစ်မှတ်ကို ထိုးခိုက်ရမှာကတော့ ငါ့ရဲ့ခေါင်းချွန်ချွန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြားလေးက လေးညှုိ့ ကို ပြန်ပြောလိုက်၏။ ( ရာဘင်ဒြာနသ် တဂိုး) မောဠိ ဟာ မြားဦးဖြစ်တယ်။ မောဠိဟာ န အ ဖ ရဲ့ ရင်ညွန့်ကို ချိန်ထားတဲ့သစ္စာမြားဦးဖြစ်တယ်။ ဒီမြားဦးရဲ့ ဦးတည်ရာဟာ တည့်မတ်လွန်းလှတယ်။ အဲ … အဲဒီမြားရဲ့ ထိုးစိုက်နှုန်းဟာ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ အဲဒီမြားရဲ့ ထိုးစိုက်နှုန်းဟာ ဘယ်လောက် နက်ရှိုိင်းမလဲ။ အဲဒီလေညှို့ကို ခင်ဗျားတို့၊ ကျုပ်တို့ဝိုင်းတင်ရမယ်၊ ၀ိုင်းဆွဲရမယ်။ ပြီး … ပစ်လွှတ်ကြမယ်။ မောဠိရဲ့အားဟာ ခင်ဗျားတို့၊ ကျုပ်တို့ဖြစ်ပြီး၊ ကျုပ်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့  “အား”ဟာ မောဠိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ။ ခင်ဗျား ဘေးထွက်နေခဲ့အုံးမလား … ဒေါသနဲ့ ကြောက်စိတ်ဟာ မကောင်းတာချင်း တူရင်တောင် ဒေါသက လူကို တက်ကြွစေတယ်။ မောဠိ အောင်မြင်ပါစေ၊ ငါတို့လွတ်လပ်ပါစေ။ န အ ဖ ၀ါဒ ကျဆုံးပါစေ။
Reactions: သုဝဏ္ဆဘူမိ မသြည် SCC
သုဝဏ္ဆဘူမိ မသြည် SCCအရင်ြဉာဏိကဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သုဝဏ္ဆဘူမိ လေဆိပ်ကအထက်ြမြာ လာဋ္ဌကိမြည့်သူကို ဟိုဟိုဒီဒီရြာမိတယ်။ သူႛကိုလည်း ကိုယ်ကမတြေႛဘူး။ ကိုယ့်ကို လည်း သူကမတြေႛဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်သူပၝလိုႛ မိတ်ဆက်ေူပာဖိုႛ ၀န်လေးတဲ့ကိုယ်ကလည်း ဋ္ဌကိတြင်္ဘပီး ဖုန်းတောင် ဆက်မထားခဲ့ဆိုတော့ လာဋ္ဌကိသြူ လာ မလာကလည်း မသေခဵာ။ ရောက်တဲ့ခရီးကို ဋ္ဌကြံသလိုပဲ သြားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မြေးထားတာမိုႛ ဋ္ဌကိသြူ မလာလဵင်လည်း သူႛတာဝန်ပဵက်ကက်ြလိုႛ မဟုတ်ပၝဘူး။ လာခဲ့လဵင်တော့ လေယာဉ် တစ်စီးလုံးမြာမြ တစ်ပၝးတည်းသော ရဟန်းတော်ူဖစ်တဲ့ စာရေးသူကို ရြာဖေဖြိုႛ အခက်အခဲူဖစ်လောက်မယ် မထင်ပၝ ဘူး။ ဟိုဟိုဒီဒီရြာုကည့်တယ်။ အားလုံးကတောူ့မန်မာူပည်သားတေလြိုႛ ထင်ရ။ သိုႛသော် ဘယ်သူမြ လနြ်းခေၞသံ မုကား။ အတူပၝလာတဲ့ ကပဍ္ဎိယဒကာက အေုကာင်ုးကားထားလိုႛ အေပက်မြာကေဵာင်းတက်နေတဲ့ သူႛတူတော်မောင်ကတော့ လာဋ္ဌကိနြေပၝတယ်။ သူႛကိုပဲ သာသနာ့ဥသ္တွောင် အူပည်ူပည်ဆုိုင်ရာူမန်မာရဟန်းတော်မဵား အဖြဲႛခဵပြ် ဥက္ကှူ ပီနန်ဆရာတော်ဋ္ဌကီုးသ၀ၝဒပေးမည့် Student Christian Center (SCC) ကို တိုက်ရိုက် ပိုႛခိုင်းလိုက်တယ်။ မူလအစီအစဉ်ကတော့ အတူပၝလာတဲ့ပင်္စည်းတေကြို သူနဲႛထည့်ပေး္ဘပီး လာဋ္ဌကိသြူနဲႛအတူ ဆရာတော်ဋ္ဌကီးရြိရာ SCC ကို တိုက်ရိုက်သြားဖိုႛပၝ။ စီစဉ်တဲ့အတိုင်ူးဖစ်မလာတော့လည်ူးဖစ်လာတဲ့အတိုင်း သင့်တင့်အောင် စီစဉ်ရမြာ ပေၝ့။ သိပ်္ဘပီးအရေးမဋ္ဌကီးတဲ့အရာအတကြ် အပိုတြေ စဉ်းစားနေဖိုႛ မလိုပၝဘူး။ လေဆိပ်ကအထက်ြမြာတော့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်စီး ရဲမဵားက္ဘပြံး္ဘပြံးရင်ြရင်ြနဲႛ "ဆ၀ၝဒီခတ်" ပၝတယ်။ မန်ြသလား မြားသလားတော့ မသိဘူး။ ကိုယ်ကလည်း အားကဵမခံ "ခတ် ခတ်" ဆ္ဘိုပီး ရယ်္ဘပီိးံတ်ြဆက်လိုက်တယ်။ မြားလဵင်လည်ူးပင်ပေုးကပၝဦး။ နောက်တစ်ခေၝက် ထိုင်းကိုသြားလဵင် မန်ြမန်ြကန်ကန် ခနြ်းတုံႛူပန်ိုိံင်အောင်။ တော်ုကာ မခတ်ပဲ ခ နေမြ၊ ဘုန်းကညာတစ်ပၝး၊ လုံးရာကူပာူးဖစ်နေမြာလည်း စိုးရပၝသေးတယ်။ စကဿာပူထက် ထိုင်ိးုိံင်ငံရာသီဥတုနဲႛူမင်ရတဲူ့မင်ကငြ်းကူမန်မာူပည်နဲႛ ပိုတူတယ်လိုႛ ခံစားရတယ်။ အထူးသူဖင့် ကိုယ်မြေးဖြားဋ္ဌကီူးပင်းခဲ့ရတဲ့ အညာနဲႛ တူတယ်လိုႛ ခံစားရတယ်။ မန်ကဵီးပင်တြေ၊ အဝေရာပင်တြေ၊ူမက်ရိုင်းတြေ၊ ဖုန်မနြ်ႛတြေ၊ ပူလောင်မတြေ၊ အသံခဵဲႛစက်သံတြေ။ လမ်းစည်းကမ်း မလိုက်နာတဲ့သူတြေ။ သူႛထက်ငၝ အတင်းတိုးဝြေႛ မောင်ိးံငြ်ုကတဲ့ တက္ကစီကားတြေ။ ပလက်ဖောင်းမရြိပဲ ကားလမ်းမပေၞက လမ်းလ္တွောက်နေသူတြေ။ သုံးဘီးတြေ၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ်တြေ။ အိုရပ်ြလိုႛ ထြေးလိုႛ။ ကိုယ်သာ ကားမောင်းရမယ်ဆိုလဵင်တော့ မလတ်ြတလတြ်ုကားထဲ အတင်းမတိုးဝံ့တာေုကာင့် ရြေႚကိုဘယ်လိုမြ ရောက်ိုိံင်မယ် မထင်ဘူး။ မော်တော် ပီကယ်မဵားရဲ့ ၀ီစီသံကလည်း တရြီရြီ၊ တစီစီ။ တက္ကစီမောင်းသမားရဲ့ ရြောင်ရင်းပတ်ရင်း တိုးရင်းဝြေႛရင်း အူမန်မောင်ိးံင်ြမကြို တထိတ်ထိတ် အုံ့သ နေမိရင်း SCC ကိုရောက်သြားတယ်။ ပီနန်ဆရာတော်ဋ္ဌကီုးသ၀ၝဒမိန်ႛုကားမည့် ခန်းမကိုရောက်တော့ တစ်နာရီကေဵာ်န္ဘေပီ။ အခမ်းအနားက မစသေး။ ရဟန်းတော်အခဵြိႛနဲႛ လူအခဵြိႛတော့ ရောက်နေုက္ဘပီ။ ခမ်းမအ၀င်ဝမြာ CNN ရဲ့ ဌာနေသတင်းထောက်က ခုကဵင်းပ တဲ့အခမ်းအနားအေုကာင်း အင်တာဗဵြးလုပ်ခဵင်လိုႛပၝတဲ့။ လာရောက်မိတ်ဆက်တယ်။ ကိုယ်က ကိုယ့်ခရီးစဉ်နဲႛဋ္ဌကြံနေ တာေုကာင့် ဆရာတော်ဋ္ဌကီးနဲႛ လာရောက်တြေႛဆုံခင်ူးဖစ်တယ်။ ကိုယ်လာမည်ဆိုတဲ့အေုကာင်း တဆင့်လ္တွောက်ုကားထားပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ဒီအခမ်းအနားအေုကာင်း ဆရာတော်ဋ္ဌကီးနဲႛ တိုက်ရိုက် မေူပာဖူးဘူး။ ဒၝေုကာင့် အ သေးစိတ်အစီအစဉ်ကို တိတိကဵကဵ မသိဘူး။ ဒၝေုကာင့် ဒီအခမ်းအနားကို စီစဉ်တဲ့သူတြေ၊ ဒၝမမြဟုတ်ုသ၀ၝဒမိန်ႛုကားမည့်ဆရာတော်တေကြို တိုက်ရိုက်မေးတာက အဆင်ေူပလိမ့်မယ်လိုႛေူပာလိုက်တယ်။ မိနစ် သုံးဆယ်ခန်ႛနောက်ကဵ္ဘပီးမြ အခမ်းအနားကို စိုိံင်ခဲ့တယ်။ူမန်မာတေပြဲလေ။ူမန်မာစံတော်ခဵိန်ကို ရောက်ရာ အရပ်တိုင်းမြာ လိုက်နာရမြာပေၝ့။ ကောင်းတဲ့အမေဆြိုလဵင်သာ မေ့ဖေဵာက်ပစ်လဵက် ပစ်မယ်။ မကောင်းတဲ့ အမူအကဵင့်မဵားဆိုလဵင်ူဖင့် ကိုယ်နဲႛမကြာ တသားတည်း သယ်ဆောင်လာတတ်ုက မဟုတ်လား။ ရေတြေလြိုႛ ဆိုနေမတြော့။ မိတ်ဆက်စကားေူပာပေးတဲ့ သူရဲ့ မပီကလာ ပီကလာ အဂဿလိပ်စကားကို ဂရုပနြားထောင်ရတယ်။ ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို ဦးဆောင်သြားတာကို အုံ့သလေးစားမိပၝတယ်။ ပီနန်ဆရာတော်ဋ္ဌကီိးံငြ့် ဦးဥတ္ဇရတိုႛ သာသနာ့ဥသ္တွောင်ဖြဲႛစည်းခဲ့မြိံငြ့် ရြေႚဆက်လုပ် မည့်လုပ်ငန်းစဉ်အခဵြိႛကို အသီးသီးေူပာုကာုးက္ဘပီး အမေးအေူဖ က္ပကို စတင်ခဲ့တယ်။ိုိံင်ငူံခားသား သတင်းထောက်တေပြၝမကူမန်မာတေလြည်း မေူးမန်ုးကပၝတယ်။ မတ်ြသား စရာ မေးခနြ်းမေးသူတေကြိုလည်း တြေႛရ္ဘပီး အကဵြိးသိပ်မမဵားလတြဲ့ မေးခနြ်းမဵားကိုလည်ုးကားရပၝတယ်။ ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် ကိုယ်သိလိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မေးဝံ့၊ မေးခငြ့်ရုကတာအတက်ြတော့ ကေဵနပ်စရာပၝ။ လတ်ြလပ်မရြဲ့ တစိတ်တစ်ပိုင်း ရသပေၝ့။ ဒီရသမဵြိးကို ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာမြာ ဘယ်မြာ ခံစားခငြ့်ရုကလိုႛလဲ။ အခမ်းအနားကို သတင်းဌာနအသီးသီး၊ လူမဵြိးအသီးသီးတက်ရောက်ုကတယ်။ူမန်မာရဟန်းတော် ၁၅ ပၝးခန်ႛလည်း တက်ရောက်ုကတယ်။ူမန်မာပရိသတ်လည်း တစ်ရာကေဵာ်ကေဵာ်လောက် ရြိမယ်မနြ်းဆမိပၝတယ်။ စုစုပေၝင်း တစ်ရာ့ အစိတ်လောက်ဆိုတော့ ပရိတ်သတ် မနည်းဘူးလိုႛ ဆိုိုိံင်ပၝတယ်။ သာမန်ိုိံင်ငံရေးအေုကာင်း ဟောေူပာုကတဲ့ ပြဲတေမြာဆို ခုလောက် မမဵားလဘြူးလိုႛ ပြဲကိုဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ ဒေၝက်တာစန်းအောင်ေူပာတာကိုကားလိုက်ရတယ်။ ခုလက်ရြိူမန်မာူပည်မြာူဖစ်နေတဲ့ အေူခအနေတေအြပေၞမြာ ရဟန်းတော်တေရြဲ့ ပၝ၀င်ပတ်သက်နေမြေုကာင့်ိုိံင်ငူံခားသားမဵားအနေနဲႛ ပိုမိုစိတ်ဝင်းစားလာတာလိုႛလည်းေူပာပၝတယ်။ သူႛစကာုးကားမိတော့ ရဟန်းတော်မဵားအနေိံငြ့် ခုလိုကမ္တာက စိတ်ဝင်စားမကြို အသုံူးပ္ဘြပီး အမိုိံင်ငံ ဆင်းရဲတငြ်းက လတြ်ေူမာက်ရေး ပိုမို ပူးပေၝင်းလုပ်ဆောင်ိုိံင်ဖိုႛ လိုပၝလိမ့်မယ် ဆိုတာနဲႛ သံသရာအရေး အမန်ြတကယ် အရေးဋ္ဌကီးပေမယ့် လောလောဆည်မြာတော့ ပင်္စပြဍ္ဎန်အရေး ပိုမိုတြေးပေုးကဖိုႛ စမြ်းအားရြိတဲ့ ဆရာတော် ဋ္ဌကီးမဵားကို တစ်ပၝတည်း လ္တွောက်ထားခဵင်စိတ်ူဖစ်မိသေးတယ်။ တကယ်တောူ့မန်မိာုိံင်ငံမြာ လက်ရြိတြေႛဋ္ဌကြံခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခက သာမန်ူပည်သူတေခြဵည်း တြေႛဋ္ဌကြံနေရတာမြ မဟုတ်တာ။ ရဟန်းရင်ြလူ၊ စစ်သားကေဵာင်းသား၊ူမန်မာူပည်သားအားလုံး မ္တွဝေခံစားနေုကရတာပၝ။ ကုန်ကုန်ေူပာရလဵင်ူမန်မာူပည်ရဲ့ သယံဇာတတေကြို ထင်တိုင်းခဵယ်လယြ် သုံးစြဲခငြ့်ရနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြတြေ ကိုယ်တိုင်လည်ူးဖစ်နေတဲ့ဒုက္ခကို မ္တွဝေခံစားနေုကရတာပၝ။ ကိုယ်လိုခဵင်တာရနေလိုႛ၊ ကိုယ်စိတ်ရြိတိုင်း လုပ်ခငြ့်ရြိနေလိုႛ ကိုယ့်ကိုယ် မထိခိုက်ဘူးလိုႛ ထင်ကောင်းထင်စရာရြိပေမယ့် လူသားတစ်ဦူးဖစ်ပၝလဵက် လူုကားမြာ လူသားတစ်ယောက်လို အဆက်အဆံ မခံရတာ။ ကဵင့်ဝတ်သိက္ခာူပည့်ဝတဲ့ လူပုံအလယ်မြာ ရဲရဲဝံ့ဝံ မဵက်ြိာံမူပရဲတာလောက် လူဖစ်ရြံးတာ ဘယ်မြာ ရြိပၝဦးမလဲ။ စိတ်တော်သိ၊ ဗောင်းတော်ညိတ်၊ အလိုက်အထိုက်ေူမြာက်ပင့်ပေၝင်းစားနေသူတြေုကားမြာသာ ရင်ကော့ခေၝင်းမော့နေိုိံင်တာမဵြိးဆိုတာက လူလိမ္ထာလူယဉ်ကေဵးတယောက်ရဲ့ အမူအကဵင့်မြ မဟုတ်တာ။ လူသား တစ်ဦူးဖစ်တည်မရြဲ့ တကယ့် ဘ၀ရသမြ မဟုတ်တာ။ ကိုယ်သာ တကယ်မန်ြကန်သူတစ်ဦးဆိုလဵင် ဒီဒုက္ခမဵြိးတြေ ဘယ်မြာရြိုိံင်မြာလဲ။ ဒီနေႛကဵင်းပတဲ့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာသူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမြာူမန်မိာုိံင်ငံ တိုးတက်တဲ့ေူပာင်းလဲမတြစ်ခုဖစ်ဖိုႛ ဘယ်လိုမဵား ကူညီပံ့ပိုးပေိးုိံင်မလဲဆိုတဲ့ အတြေးကတော့ အသီးသီးရြိနေမြာပၝ။ ။ ဇိံဍ္ဍ၀ၝရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၀ဂ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံ၊ ဇန်န၀ၝရီ ၁၅က လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘန်ကောက်ူမြိႚ၊ သာသနမောဠိ သတင်းစာရငြ်းလင်းပြဲူမင်ကငြ်း၊ ဦးပညာဝံသ၊ ဦးဥတ္ဇရ)
ကေ - ပုံရိပ်
ပုံရိပ် ကေဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈
Reactions: ဆန်ဖရန်စင်္စကိုသိုႚ အိုလံပစ် မီးရြးတိုင် လာမည်
ဆန်ဖရန်စင်္စကိုသိုႚ အိုလံပစ် မီးရြးတိုင် လာမည်၊ တရုတ်အိုလံပစ် သပိတ်မြောက်သံမဵား အရြိန်ူမငြ့် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇန်န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လူႚအခငြ့်အရေးခဵြိးဖောက်မမြဵာိးံငြ့် လတ်ြလပ်စြာ ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုခငြ့် တင်ုးကပ်စြာ ထိမ်းခဵပ်ြထားသော တရုတ်ိုံင်ငံက လက်ခံကဵင်းပမည့်ေိံရြာသီ အိုလံပစ်ကို သပိတ်မြောက်ရေး လပ်ြရြားမမြဵား အသံကဵယ်ကဵယ်လောင်လောင်ုကားနေရူပီူဖစ်သည်။ တိဘက် လတ်ြလပ်ရေိးံငြ့် ဖဲန်လန်ြဂနြ်း ဘာသာရေးလတ်ြလပ်ခငြ့် အဖြဲႚမဵားကလည်ိးိုံင်ငံတကာသိုႚ ခရီးဆန်ႚလာမည့် အိုလံပစ်မီးရြးတိုင်ကို ရောက်ရာအရပ်မဵားက ဆန်ႚကဵင်ရြံႚခဵ ဆိံ္ဋူပုကရန် တပ်လနြ်ႚဆောင်ရက်ြနေုကူပီူဖစ်သည်။ူဗိတိန်ိုံင်ငံက ခဵားလ်စ် မင်းသားကလည်း အိုလံပစ် ဧည့်ခံပြဲမဵားသိုႚ တက်ရောက်မည် မဟုတ်ေုကာင်း၊ တရုတ်ူပည် အိုလံပစ်ဖငြ့်ပြဲသိုႚလည်း တက်ရောက်မည် မဟုတ်ေုကာင်း တရားဝင်ထုတ်ဖော်ေူပာုကားလိုက်သည့်အတကြ် သပိတ်မြောက်အဖြဲႚမဵားအတကြ် အားတက်စရာူဖစ်ရသည်ဟု ဆိုကသည်။ စီးပြားရေိးံငြ့် လူမအြဖြဲႚအစည်းမဵားက သပိတ်မြောက်ုကသလို၊ိုံင်ငံအစိုးရမဵားကလည်း ကန်ႚကကြ်ုကစေလိုေုကာင်း၊ တဦးခဵင်းစီကလည်း ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုကစေလိုေုကာင်း သပိတ်မြောက် ကော်မီတီမဵားကြိံးဆော်လဵက်ရြိသည်။ ဧူပီလ ၉ ရက်နေႚတငြ်ေူမာက်အမေရိကတိုက်တခုလုံးကိုယ်စာူးပအြူဖစ် အမေရိကန်ိုံင်ငံ၊ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုမြိႚသိုႚ အိုလံပစ် မီးရြးတိုင် လာရောက်မည်ူဖစ်ရာ၊ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုက လူမအြခငြ့်အရေးအဖြဲႚမဵားက ဆန်ႚကဵင်ဆိံ္ဋူပုကရန်ူပင်ဆင်လဵက်ရြိသည်။ သိုႚရာတငြ် တရုတ်အစိုးရဖက်မြ ဆန်ဖရန်ူမြိႚတော်ဝန်ိံငြ့် အုပ်ခဵပ်ြရေးအဖြဲႚ၀င်မဵား၊ တရုတ်စီးပြားရေးလုပ်ငန်းရင်ြမဵားသိုႚ သီူးခားတောင်းဆိုမမြဵား၊ မေတ္ဇာရပ်ခံခဵက်မဵာူးပထြားသူဖင့် ယခုအခဵိန်ထိ မီးရြးတိုင်သတင်း အသေးစိတ်ကို ထုတ်ူပန်ူခင်း မရြိဘဲထားသူဖင့် ဆိံ္ဋူပမည့်အစီအစဉ်မဵားမြာ အခက်အခဲုကြံနေသည်ဟု သိရသည်။ ထိုကိင်္စိံငြ့် ပတ်သက်၍ူမန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရေစီရေးရာ မဟာမိတ်အဖြဲႚက ကိုညနြ်ႚသန်းကေူပာုကားရာတငြ် - တရုတ်ူပည်သည်ိုံင်ငံတကာက ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆိုႚအရေးယူခင်း ခံနေရသည့်ူမန်မာစစ်အစိုးရကို အစဉ်အူမဲ ထောက်ခံအားပေးနေူခင်း၊ူပည်တငြ်းရေး ၀င်မစက်ြသည့် မူဖင့် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာ့သပိတ်အရေးတော်ပုံအတငြ်း သံဃာတော်မဵား၊ လူထုမဵားအပေၞ စစ်တပ်၏ သြေးေူမကဵြိံမ်ိံငြ်းမမြဵားကို အခဵိန်မီ ထိထိရောက်ရောက် ကန်ႚကက်ြပေးရန်ြေိာံင့်ြေိံးခဲူ့ခင်ိးံငြ့်ူမန်မာူပည်သည်လည်း တရုတ်ူပည်ိံငြ့်အလားတူသည့် လူအခငြ့်အရေး၊ ဘာသာရေး၊ စာနယ်ဇင်း လတ်ြလပ်ခငြ့်ူပသနာမဵားရြိနေသည့် အိမ်နီးခဵင်ိးိုံင်ငံတခုဖစ်နေူခင်းတိုႚေုကာင့် တရုတ်အိုလံပစ်ကိုမန်မာအမဵြိးသားရေူးပသနာတခုအသင်ြအူဖစ် ဆက်စပ် ရြူမင်ူပီး သပိတ်မြောက်ရမည်ူဖစ်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ေူပာုကားပၝသည်။ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုမြိႚတော်ုကီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေးကို ထောက်ခံသောအာူးဖင့် စစ်အစိုးရ သက်ဆိုးမရည်ြစေရေးအတကြ်၊ စစ်အစိုးရကို အားပေးနေသည့် တရုတ်၊ အိံ္ဋိယိံငြ့် အူခာိးိုံင်ငံမဵားမြ စီးပြားရေး ရင်ြးီံူးမပြ်ြိံမမြဵားကို ဆန်ႚကဵင်ေုကာင်း ၂၀၀၇ိံစ်ြမကုန်မီက ဆုံူးဖတ်ခဵက်တရပ် ခဵထာူးပီူးဖစ်သူဖင့်၊ စစ်အစိုးရိံငြ့် စီးပြားရေး၊ စစ်ရေိးံငြ့်ိုိံင်ငံရေး လမ်းပငြ့်နေသည့် တရုတ်ူပည်ကို ကန်ႚကကြ်ေုကာင်ူးပသရန်၊ ယခု အိုလံပစ်မီးရြးတိုင် ခရီးစဉ်သည် အသင့််တော်ဆုံး အခဵိန်အခၝပင်ူဖစ်ေုကာင်း ကိုလည်း သုံးသပ်သြားပၝသည်။(ူမန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရေစီရေးရာ မဟာမိတ်အဖြဲႚ လပ်ြရြားမြ သတင်းဓာတ်ပုံဖစ်ပၝတယ်။ ဆန်ဖရန်စင်္စကိုမြိႚတော်ရဲႚ ဆုံူးဖတ်ခဵက် သတင်းကို မိုးမခက ဒီနေရာမြာ ဖတ်ိုံင်ပၝတယ်။)
Reactions: ခန်ြပန်းစိန် -ူမန်မာ့ ထုံးစံသစ်မဵား
ူမန်မာ့ ထုံးစံသစ်မဵား ခန်ြပန်းစိန်ဇန်န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (၁) ဒီလိုနေရာလေးမြာ နေရတာ သိပ်သက်သာတာပဲ။ ဘာလိုႚဆို ဒီမြာက ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ်က အကူအညီပေးခဲ့ဖူး ခဲ့ဖူး၊ ဘယ်နေရာမြာပဲူပန်တြေႚတြေႚ၊ိံတ်ြဆက်တာူပြံူးပတာမဵြိး ဒီအရပ်မြာမရြိုကဘူးလေ။ ဒၝေုကာင့် သိပ်သက်သာတယ်လိုႚေူပာတာ၊ စေဵးပဲသြားသြား လဘက်ရည်ဆိုပဲထိုင်ထိုင်ူပြံူးပြိုံတ်ဆက်တဲ့ ဓလေ့မရြိႚုကဘူး။ တခုတော့ရြိတယ်။ ကောင်းဘြိင်ြကားတေထြဲကလို တယောက်ကို တယောက်တြေႚုကရင် ခၝးက သေနတ်နဲႚ ထုတ်ပစ်ုကတော့မယ့် အိုက်တင်နဲႚ၊ ၀င်ထိုးတော့မယ့်ပုံနဲႚ တယောက်ကို တယောက်ုကည့်ုကတယ်။ ကိုယ်က တက်ကဆက်တိုႚ မက်ဆီကိုတိုႚ ရောက်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ ဒၝကလည်းတခုခုအေုကာင်းတော့ရြိမြာပေၝ့လေ၊ ထားလိုက်ပၝတော့၊ ဘယ်နေရာ သြားသြား ဘယ်သူႚကိုမြ သြာူးပြံူးပစရာ မလိုတော့ အေးတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုလည်း ဘယ်သူကမြ အရေးလုပ်ိံတ်ြဆက်မြာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း သိထားရပၝမယ်။ုကာလာတော့လည်း ကိုယ်တောင် အဲလို မိုက်ကန်းကန်း ဂဵစ်တစ်တစ်ပုံ ပေၝက်နေူပီလား မသိဖူး။ တြေႚတဲႚလူတေကြ "ပုံစံကေူပာင်းနေတယ်"ေူပာတယ်၊ "လူက လူမိုက်ပုံ ပေၝက်နေတယ်" လိုႚေူပာုကတယ်။ "ရေေူမ လိုက်လိုႚ နေမြာပၝ " လိုႚေူဖရတယ်။ တနေႚမနက်ခင်းမြာ ကိုယ် ဂဵာနယ်လေး ဖတ်နေတုန်း၊ အိမ်ထဲကို စိနတယောက် ၀င်ခဵလာတယ်။ သူက လက်ထဲကိုင်ထားတဲႚ ဘုရားပုံ ပိုႚစကဒ်လေးတခု ကိုယ့်လက်ထဲ လာထည့်ပေးတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ေုကာင်သြားတာပေၝ့။ ဒီလိုပဲ ထီသမားတြေ လုပ်တတ်ုကတယ်လေ။ မထိုးခဵင်၊ မခဵင် အတြဲလိုက် ထိုးခိုင်း၊ ဇတ်ြရော တအားရော လုပ်တတ်ုကတော့ ကိုယ်က တနြ်ႚသြားတယ်။ုကည့်လိုက်တော့ ဟိုဘက်ူပည်က စိန ငနဲပဲ။ူမန်မာလို မတတ်ဘူး။ သူက စိနလိုေူပာူပီး သူႚကဒ်ကို ထိုးပေးနေတယ်။ ထီသမားတေလြိုပဲ ကိုယ်က မယူဘူး၊ လက်ခၝူပ … နားမလည်ဘူး။ ရပ်ြပတဲႚ လုပ်လည်း မရဘူး။ အံမယ် …ူပြံးမဵားတောင်ူပြံးလိုက်သေးတယ်။ ထပ် ထိုး လာပေူးပန်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း "ေုသာ် … သူက အလကား လိုက်ဝေတယ် ထင်တယ်၊ အားနာပၝတယ်လေ" ဆိုပီး ဘုရားပုံကဒ်လေးကို ယူလိုက်တယ်၊ူပီူးပီးရောပေၝ့လေ။ူပန်မယ် အောက်မေ့တာ၊ မူပန်ဘူးဗဵ။ စိန လိုေူပာူပန်ပၝရော။ ကိုယ်လည်းေုကာင်ုကည့်နေတာပေၝ့။ နည်းနည်ုးကာလာတော့ ဒီ စိန ငနဲက ဒေၝပလြာတယ်။ သူႚဘောင်းဘီအိတ်ထဲကူမန်မာပိုက်ဆံ၊ စိနပိုက်ဆံတြေ ထုတ်ူပီး အော်ေူပာတယ်။ အံမယ် … သူက ပိုက်ဆံတောင်းတာကိုး။ ထင်သားပဲ၊ သူႚကဒ်ကိုပန်ပေးလိုက်တယ်၊ လက်ခၝူပတယ်၊ သူကပဲ ဒေၝပြ ကိုယ့်ကို အော်သေးတယ်။ ဒီဘက်မြာ ဒီလိုခဵည်းပၝပဲ။ ပိုက်ဆံလည်း တောင်းသေး၊ ကိုယ်ကပဲူပန်တောင်းပန်၊ မဵက်ြိာံခဵိသြေးရဦးမယ့်ကိန်း။ စိတ်တြေ ညစ်လိုက်ပၝဘိဗဵာ။ မနက်စောစော ကဵက်သရေ တုံးလိုက်တာ။ (၂) နေႚလည်ဆို ကိုယ်က ညစာအတကြ် စေဵးကိုသြာူးပီး စေဵးဝယ်ရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ထက်ြရတာပေၝ့။ ဒၝနဲႚ စေဵးလမ်းလေးထဲလည်း ရောက်ရော၊ လူတြေ အုံနေုကတယ်၊ လမ်းတောင်မြ ပိတ်နေတယ်၊ ဘာတြေူဖစ်နေလိုႚပၝလိမ့်ပေၝ့။ ကိုယ်က ဆိုင်ကယ်ကို အသာရပ်ရင်ုးကည့်လိုက်တယ်၊ စက်ဘီးတစီး လက်ကိုင်ကို ပိန်ြိဲံႚြိဲံႚ ရိုးတိရိုးတပုံ ခပ်ိံမြ်ိးံမြ်း လူတယောက်ကတဘက် ဂဵစ်တစ်တစ် ပုံ ဂဵင်းဘောင်းဘီ တီရပ်ြအစင်ုးကားနဲႚဆံပင်ဘုတ်သိုက်နဲႚလူကတဘက် ဆြဲနေုကတယ်၊ကိုယ်လည်း ဘာလဲပေၝ့။ ခပ်ရိုးတိရိုးတာပုံ လူကေူပာတယ်။ " တောင်းပန်ပၝတယ်။ ဒၝ ကဵနော် ပေဵာက်သြားတဲႚ သမီးစက်ဘီးလေးပၝ၊ ယူသြားမိတာလား။" ဂဵစ်တစ်တစ်လူက စက်ဘီးကို လက်မလတ်ြဘဲ ကိုင်ထားရင်း " ဟုတ်တယ် ဘာလုပ်ခဵင်လဲ။ ကဵပြ် မရြိလိုႚ ခိုးတယ်ဗဵာ၊ လုတယ်ဗဵာ၊ ခင်ဗဵား ဘာလုပ်ခဵင်လဲ။"ုကည့်နေတဲႚ လူတြေူငိမ်နေုကတယ်။ ဒၝပေမဲႚ ရိုးတိရိုးတာလူကူပန်ေူပာတယ်။ "ကဵနော့်သမီးလေးအတကြ် ဒီစက်ဘီလေးဝယ်ပေးဖိုႚ သုံိးံစ်ြတောင် မနည်းခေဋ္ဋတာူပီး စုလာခဲႚရတာပၝဗဵာ။ ကဵနော့်သမီးလေး စက်ဘီးကိုပန်ပေးပၝဗဵာ။" ဂဵစ်တစ်တစ်ငနဲက ပိုတောင် မဵက်ြိာံထားက မာလာသေးတယ်။ "ူပန်ယူခဵင်လည်း ယူပေၝ့။ ဘာူပလြဲ။ ကဵပ်ြကို ဘာလုပ်ခဵင်သေးလဲ၊ ရဲတိုင်ဦးမြာလား။ တိုင်ရဲ တိုင်ုကည့်လိုက်ပေၝ့။ စမ်းလိုက်လေ။ ရော့ … ခင်ဗဵားကိုသနားလိုႚူပန်ပေးတာ၊ုကားလား ကဵပြ်ေူပာတာ။ သေသြားမယ်၊ တိုင်ရဲ တိုင်ုကည့် …" ဂဵစ်တစ်တစ်လူက စက်ဘီးလက်ကိုင်ကို ဆောင့်တနြ်းလိုက်ူပီး ဘုကည့်ုကည့်ူပီး ထက်ြသြားတယ်။ ရိုးတိရိုးတာလူက သူႚစက်ဘီးလေးကို ရိုႚရိုႚလေူးပန်ယူပီး … " ဟုတ်ကဲ့။ စိတ်ခဵပၝ မတိုင်ပၝဘူး …"ေူပာရင်း သူႚစက်ဘီးလေးကို ၀မ်းပန်းတသာ ယူရြာတယ်။ ၀ိုင်ုးကည့်နေတဲ့ လူတေလြည်း မဵက်လညြ့်ဆေးရောင်းပြဲတခုပီးသြားသလို၊ အလ္တွိလ္တြွိ ထက်ြသြာုးကတယ်။ ဘယ်သူကမြ ဘာမြ မေူပာဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ထက်ြသြာုးကတယ်။ ဂဵစ်တစ်တစ်လူလည်း လူတြေုကားမြာ ပေဵာက်သြားတယ်။ ကိုယ်က ဆိုင်ကယ်ပေၞကနေ ဟာ ငၝလည်း ကိုယ်နဲႚ မဆိုင်သလို ရပ်ုကည့်နေတဲႚ အထဲ ပၝနေပၝလား လိုႚ တြေးမိူပီး မဵက်ြိာုံကီးပူတက်လာတယ်။ စက်ဘီးသူခိုးက အေးအေးဆေးဆေးပဲ ထက်ြသြားတာ၊ လူတေလြည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲ ထက်ြသြားခဲႚုကတာ၊ ကိုယ်လည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းထက်ြလာခဲႚတယ်။ (၃) ဒၝနဲႚ ဇာတ်ကမူပတ်ဘူး။ ညနေကဵတော့ ဟိုဘက်ိုံင်ငံက ဂဵယ်ဂေၝင်ထဲ သြာူးပီး ဓၝတ်ဆီထည့်ရဦးမြာမိုႚ ထက်ြလာခဲႚတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆင်ူဖဂြိတ်မြာ တိုင်ူးပည်ကထက်ြဖိုႚ ပိုက်ဆံ ပေးနေရတယ်။ သူမဵားတိုင်ူးပည်ကိုထက်ြဖိုႚ ကိုယ့်တိုင်ူးပည်ကို ထက်ြခပိုက်ဆံ ပေးရတာ။ တခၝ သူမဵာိးိုံင်ငံသြားဖိုႚ ကိုယ့်တိုင်ူးပည်အတကြ် ဘီးလြိမ့်ခ ပေးရပၝတယ်။ ကိုယ်လည်ိးိုံင်ငံသားဆိုတော့ ပေးရတာပေၝ့လေ။ ပေးပေၝ့။ ရော့ … ။ ဒီတုန်းမြာပေၝ့၊ ကိုယ်ရြေႚကူမန်မာမိန်းမတယောက် လည်ပင်းမြာ ရေဆြဲုကြိုးကီး ဆြဲထားတယ်။ သူ ကိုယ့်ရြေႚ ထက်ြသြာူးပီး လမ်းပေၞလည်းဆင်းသြားရောူဗနြ်းဆို လိူံစ်ြယောက် သူႚနားေူပးကပ်သြာူးပီး လည်ပင်းကဆြဲုကြိးကို ဆြဲူဖတြ်ူပီးေူပုးကတယ်။ လုတာကူမန်မာပိုင်နက် ဂိတ်အကေဵာ်၊ လုေူပးတဲ့လိူံစ်ြယောက်ကူမန်မာူပည်ဘက် ထကြ်ေူပုးကတယ်။ ဆြဲုကြိးအလုခံရတဲ့မိန်းမလည်း အော်တော့တာပေၝ့။ ဒၝကိုကည့်နေတဲ့ စိနရဲကူမင်တော့ေူပး ထက်ြလာတယ်။ သူ အော်တယ်၊ ကိုယ့်ဘက်က လူတေကြို စိနလို အော်တယ်။ " လိုက် … လိုက် …။ ဆြဲုကြိူးဖတ်ြသြားတဲ့ ကောင်ိံစ်ြကောင် နောက်လိုက် …" လိုႚေူပာနေပုံပၝပဲ။ ကိုယ်လည်းေုကာင်ုကည့်နေမိတယ်။ ဟိုလိူံစ်ြယောက် လမ်းမတည့်တည့် ခပ်တည်တည်ပဲေူပးသြားတယ်။ နောက်တခၝပဲ လညြ့်ုကည့်တယ်။ အံမယ် .. အေူပးကြေိံးတောင် သြားသေးတယ်။ လမ်းလ္တွောက်ူပိင်ြပြဲဝင်နေသလို သက်ြသက်ြလေး လ္တွောက်နေတာပဲ။ လူတြေ အားလုံး ငေးနေုကတယ်။ူပီးတော့ ကိုယ့်လမ်းကို ဆက် ထကြ် သြာုးကတာပဲ။ ကိုယ်ုကည့်လိုက်တော့ ဂိတ်က လက်နက်ကိုင်ဝန်ထမ်း လိူံစ်ြယောက် အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊ ထိုင်ုကည့်နေုကတယ်။ စိနရဲက ဒေၝတေပြူပီး ဒီဘက်ကို လမြ်းဆဲနေတယ်။ုကည့်ရတာ … "ဟေ့ကောင်တြေ … ဘာလုပ်နေုကတာလဲကြ။ လိုက်ုကပၝလား …" လိုႚ အော်နေပုံပဲ။ကိုယ်လည်း ငေုးကည့်ူပီး ဟိုဘက် စိန်ႚတိုင်ူးပည်ထဲ ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းဝင်လိုက်တယ်။ ဟိုမိန်းမ မဵက်ရည်အရြဲသားနဲႚ ငိုပီးေူပးလိုက်တယ်။ ကိုယ် ထင်တယ်။ ဒၝ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်း ရိုက်နေတာ နေမြာပၝ။ ဒၝပေမဲ့ ကင်မရာတြေ ဒၝရိုက်တာတြေ မတြေႚဘူး။ ဘယ်ကမဵား ရိုက်နေုကပၝလိမ့် လိုႚ တြေးတယ်။ (၂၉ - ၁ - ၂၀၀၈)
Reactions: ထိန်လင်း - မရြိမူဖစ် ရမ်ဘို
မရြိမူဖစ် ရမ်ဘိုထိန်လင်းဇန်န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဇန်န၀ၝရီ ၂၅ ရက်နေႛက စလိုႛ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုမြာ ရုံတင်နေတဲ့ "ရမ်ဘို" ရုပ်ရင်ြကာုးကည့်္ဘပီုးက္ဘပီလား။ မုကည့်ရသေးလိုႛ ကိုယ်တိုင် သြားမုကည့်ူဖစ်သေးရင်တောင် နီးစပ်ရာလူတေကြို သြာုးကည့်ဖိုႛ တိုက်တနြ်းစေခဵင်ပၝတယ်။ ဇာတ်ကားကူမန်မာူပည်ရဲႚ မကောင်းတဲ့အေူခအနေတေကြို ကောင်းကောင်းဋ္ဌကီး ရိုက်ူပထားတာမိုႛ ကောင်းတဲ့အရသာရော မကောင်းတဲ့အရသာပၝ တခၝတည်း ခံစားသြားရမယ်လိုႛ ဆိုရပၝလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူကမြ လာဘ်မထိုးရဘဲူမန်မာူပည်အေုကာင်း ကမ္တာကသိအောင် ရုပ်ရင်ြရိုက်ခဲ့တဲ့သူတေကြို ကဵနော်ကလည်း အခမဲ့ေုကာ်ူငာပေးတဲ့သဘောပေၝ့။ ဒီဇာတ်ကားကိုမန်မာသရုပ်ဆောင်တေနြဲႛူမန်မာူပည်နယ်စပ်မြာ ရိုက်လိမ့်မယ်လိုႛ သတင်းစကားတြေ ဋ္ဌကိတြင်ထက်ြခဲ့ပေမယ့်ူမန်မာူပည်နဲႛပတ်သက်လိုႛ တစနြ်းတစ ပဲ ပၝလိမ့်မယ်၊ အမဵားဋ္ဌကီး ဇောင်းပေး္ဘပီး ရိုက်လိမ့်မယ်လိုႛ မထင်ခဲ့မိပၝဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒၝရဲႚ ဆန်ႛကဵင်ဘက်ပၝပဲ။ ဇာတ်ကား စတယ်ဆိုတာနဲႛ ၁၉၈၈ ခိုံစ်ြကနေ နောက်ပိုင်းအထိူမန်မာူပည်ရဲႚ အနှိူာရုံ မတ်ြတမ်းမတ်ြရာတေကြိုပသရင်ူးပည်တငြ်းစစ် သက်ဆိုးရည်ြနေရတဲူ့မန်မာူပည်အေုကာင်း မိတ်ဆက်ခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီလို ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို မတ်ြတမ်းတေကြိုပသတဲ့အခၝ ၁၉၈၈ ပစ်ခတ်မမြတ်ြတမ်းတြေ၊ နယ်စပ်ဒေသက နအဖ စစ်တပ်ရဲႚြိံပ်စက်ရမ်းကားမတြေကြိုသာမက္ဘပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြကုန်ပိုင်း သံဃာ့အရေးအခင်း ကာလအတငြ်း အာဏာပိုင်တေရြႚဲ သတ်ူဖတ်မြေုကာင့် ပဵံလန်ြတော်မူခဲ့ရတဲ့ ပုဇန်ြတောင်ခေဵာင်းအတငြ်းက သံဃာတော်ရႚဲ ဓာတ်ပုံမတ်ြတမ်းကိုတောင် ဖော်ူပိုံင်ခဲ့ပၝတယ်။ Beyond Rangoon (1996) နောက်ပိုင်ူးမန်မာူပည်အေုကာင်း ထည့်သငြ်းရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရင်ြဆိုလိုႛ Stealth (2005) ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားပဲ ရြိပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့်လည်း အဲဒီကားမြာကူမန်မာူပည်အေုကာင်း နည်းနည်းပဲ ထည့်ထားတာူဖစ်ပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် အုကမ်းဖက်သမားတြေ ခိုအောင်းနေတဲ့ ရန်ကုန်္ဘမြိႛကို လေေုကာင်းက သြားတိုက်တဲ့အခန်းပဲ ပၝတာပၝ။ အဲဒီအခန်းကိုလည်း စတူဒီယိုထဲမြာပဲ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ပေၞပၝတယ်။ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတော့ သူတိုႛ သြားတိုက်တဲ့ ရန်ကုန်္ဘမြိႛဟာ လ္တွပ်စစ်မီးတြေ ထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့ တကယ့်္ဘမြိႛူပူဖစ်နေလိုႛပၝပဲ။ အခု ရမ်ဘို ဇာတ်ကားမြာတော့ ထိုင်း ဏ္ဍေမအြလမဍ္ဎာယ်ဆရာတေအြတကြ် ဏ္ဍေမဖြမ်းပေးသူ ရမ်ဘိုကို နယ်စပ်နေ လူထုအတကြ် ကူညီဖိုႛရောက်လာတဲ့ အမေရိကန် ဆေးဝန်ထမ်းတစုကူမန်မာူပည်ဘက် လိုက်ပိုႛဖိုႛ အကူအညီတောင်းရာက စ ထားတာူဖစ်ပၝတယ်။ အဲဒီဆေးဝန်ထမ်းတြေ ရောက်နေတဲ့ရြာကို နအဖ စစ်တပ် ၀င်္ဘပီး ပစ်ခတ် သတ်ူဖတ် ဖမ်းဆီးမတြေလြုပ်၊ အဲဒီ ဆေးဝန်ထမ်းတေကြို တပ်ရင်း ၃၆၀ ဆီ ဖမ်းခေၞသြား၊ သူတိုႛကိုေုကးစားစစ်သားတေကြ လိုက်ကယ်၊ တိံယ်ြငင် တစင်ပၝ ဆိုသလို ရမ်ဘိုလည်း အဲဒီူဖစ်ရပ်ထဲကို ရောက်သြားရင်း တိုက်ုကခိုက်ုကတဲ့အေုကာင်း ဇာတ်အိမ်ဖြဲႛထားပၝတယ်။ Beyond Rangoon လိုဖစ်ရပ်တြေ နေရာတြေ အမဵားဋ္ဌကီး၊ ဇာတ်အိမ်အကဵယ်ဋ္ဌကီူးပထားတာမဟုတ်ပၝဘူး။ ထိုင်ိးိုံင်ငံ မဲဆောက်ဒေသ၊ူမန်မာူပည်နယ်စပ် ဖာပန်ြခရိုင်ဘက်က ကရင်ရြာကလေး ၂ ခုလောက်၊ နအဖ စစ်စခန်း နဲႛ တောတငြ်းထဲမြာူဖစ်တဲ့အေုကာင်းအရာလောက်ကိုပဲူပထားတာပၝ။ ဒၝပေမယ့်လည်း ထိုင်းဘက်မြာ ထိုင်းစကားေူပာုကတာ၊ူမန်မာူပည်ဘက်မြာ ဗမာလို၊ ကရင်လိုေူပာုကတာတေကြ ပီူပင်္ဘပီး လိုတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုသာ အဂဿလိပ်စာတန်းထိုးပၝတယ်။ တောတငြ်းဇာတ်ဝင်ခန်းတြေ အထူးပလြုပ်ခဵက်တြေ အသံစနစ်တေကြလည်း ပီူပင်ပၝတယ်။ူမန်မာူပည်ထဲကူဖစ်ရပ်တေနြဲႛပတ်သက်လိုႛ အနီးစပ်ဆုံူးဖစ်အောင် ဋ္ဌကြိးစားထားတဲ့ပုံလည်း ပေၞပၝတယ်။ူပည်တငြ်းစစ် သက်ဆိုးရည်ြမရြဲႚ ဒဏ်ရာူဖစ်တဲ့ေူမူမပ်ြမိုင်းတေအြေုကာင်း အမဵားဋ္ဌကီး မဖော်ူပပေမယ့် မိုင်းေုကာင့်ေူခထောက်တြေူပတ်နေရသူတေကြိုတော့ တန်းစ္ဘီပီူးပထားပၝတယ်။ူမန်မာရုပ်ရင်ြတေထြဲမြာ တြေႛရဖိုႛ လမ်းမူမင်တဲ့ အပိုင်းကတော့ ဇာတ်လမ်းနိဂုံးမတိုင်ခင် အခန်းပၝပဲ။ နအဖ စစ်တပ်က ဖမ်းထားတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတေကြို သြားကယ်ခဲ့တဲ့သူတေနြဲႛ ဆေးဝန်ထမ်းတေကြို စစ်တပ်ကုကည်းတပ်ရော၊ ရေတပ်ကပၝ အတင်းအဓမ္ထ လိုက်သတ်လိုႛ ဒဏ်ရာ ရသူတေရ္ဘြပီးေူပးပေၝက်ပိတ်နေတဲ့အခဵိန် ကရင်သူပုန်တြေ ရောက်လ္ဘာပီး ကယ်တဲ့အခန်းပဲူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီအခန်းကိုကည့်လိုက်ရတဲ့သူတေအြဖိုႛ ဘယ်သူတေဟြာ ဘယ်လိုအမဵြိးအစားလဲဆိုတာ တြေးမိသြားမြာပၝပဲ။ ရာဇ၀တ်သားကို ဥပဒေဘက်တော်သားက အိုံင်ယူလိုက်တဲ့ပုံမဵြိး ဖော်ူပထားတာမိုႛူမန်မာူပည်သူတေရြႚဲ အိပ်မက်တေဟြာ ဒီအတိုင်ူးဖစ်လေမလားလိုႛတောင် တြေးလိုက်မိပၝတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဒၝရိုက်တာလုပ်ထားတဲ့ စတောလုံး ကူမန်မာူပည်သူတေကြို ကူညီတဲ့အနေနဲႛ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အေုကာင်း နိဂုံး စာတန်းထိုးတဲ့အခၝ ထည့်ထားပၝတယ်။ ရုပ်ရငြ်ုကည့်ူဖစ်တဲ့အခဵိန်က ရုံးဖငြ့်ရက်ရဲႚည နောက်ဆုံးပြဲစဉ်ဆိုတော့ ရုပ်ရင်ြရုံထဲမြာ လူမူပည့်ပၝဘူး။ ဒၝပေမယ့်လည်း ထူးထူးခာူးခာူးဖစ်ရပ်ကိုတော့ ဋ္ဌကံခြဲ့ရပၝတယ်။ အဲဒၝကတော့ ဇာတ်သိမ်းလိုႛ စာတန်းထိုးလိုက်တာနဲႛ ခန်းမရဲႚ နေရာ ၂ နေရာ၊ ၃ နေရာလောက်က တ္ဘပိင်ြတည်းလိုလို ထက်ြလာတဲ့ လက်ခုပ်သံပဲူဖစ်ပၝတယ်။ အဲဒီနောက်မြာတော့ ပရိသတ်အားလုံးရႚဲ လက်ခုပ်သံတြေ ညံသြားပၝတော့တယ်။ ဒၝဟာ ရမ်ဘိုရႚဲ အောင်ူမင်မြ၊ူမန်မာူပည်အတကြ် အားပေးမပြဲူဖစ်ပၝလိမ့်မယ်။ နအဖ အနေနဲႛ သူတိုႛစစ်တပ်ရဲႚ ဆိုးယုတ်မတြေ၊ ရက်စက်မတြေကြို သိအောင်ူပခဵင်တယ်ဆိုရင်တောူ့ဖင့် သူတိုႛရႚဲ အောင်ူမင်မလြည်ူးဖစ်ပေတယ်လိုႛ ဆိုရမလိုပၝပဲ။ သေခဵာတာကတောူ့မန်မာူပည်အေုကာင်းကို ကမ္တာက ပ္ဘိုပီး အာရုံစိုက်လိာိုံင်ပၝတယ်။ ဒုတိယ ကမ္တာစစ်ဝန်းကဵင်နဲႛ နောက်ပိုင်းကာလတေတြုန်းက Bombs Over Burma (1943)၊ Objective, Burma! (1945)၊ The Purple Plain (1954)၊ Escape to Burma (1955)၊ The Burmese Harp (1956)၊ The Bridge on the River Kwai (1957)၊ Never So Few (1959) ဆိုတဲူ့မန်မာူပည်အေုကာင်း၊ူမန်မာူပည်နဲႛ ဆက်ိံယ်ြတဲ့ ရုပ်ရင်ြဇာတ်ကားတြေ ဆက်တိုက် ထက်ြလာခဲ့သလို "ရမ်ဘို" လို ကားမဵြိး ဆက်္ဘပီး ထက်ြလိာိုံင်ရင်ူဖင့်ူမန်မာူပည်ရႚဲ အနေအထားတေကြို ကမ္တာက ပ္ဘိုပီး သိ၊ ပ္ဘိုပီး အာရုံစိုက်လာမြာ မလြဲပၝဘူး။ူမန်မာူပည် ဒီမိုကရေစီရေးေူပာင်းလဲမြ တော်လန်ြရေးဋ္ဌကီးမြာ ဒီလို ကူညီမတြေကြ မရြိမူဖစ် လိုအပ်ခဵက်တေပြဲ မဟုတ်ပၝလား။ ။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: အောင်ခဵြိူမ - စက်တင်ဘာ ၀ိဥာဉ်တြေ
သြေးစနြ်းလက်တေကြို ဘယ်သူတြေိံတ်ြဆက်လေမလဲ
သြေးစနြ်းလက်တေကြို ဘယ်သူတြေိံတ်ြဆက်လေမလဲဂဵာနယ်လစ်ကိုကိုဇန်န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ခိုံစ်ြအတကြ်ူမန်မာ့ရုပ်ရင်ြထူးခဋ္ဋန်ဆုတေကြို ဖေဖော်ဝၝရီလဆန်းပိုင်းမြာ နေူပည်တော်မြာ ပေးတော့ မယ်တဲ့ခင်ဗဵ။ စက်တင်ဘာ လူသတ်စစ်အစိုးရက ပေးအပ်ခဵီူးမငြ့်မယ့် အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲဋ္ဌကီးပေၝ့ခင်ဗဵာ။ူပည်တငြ်း ထုတ် ဂဵာနယ်တစောင်မြာ ဖတ်ရတာကိုေူပာူပတာပၝ။ "ကန်ြဖမ်း"ူဖစ်မူဖစ်ကတော့ ဂဵာနယ်လစ်ကိုကိုလည်း အာမမခိံိုံင်ဘူးခင်ဗဵ။ နအဖလက်ထက်မြာက ဒီကနေႛ မနက်ူဖန် သေခဵာတာရယ်လိုႛ ဘာဆိုဘာမြ မရြိလေတော့ တပ်အပ်မေူပိာိုံင်တာကို အူပစ်လိုႛ မဆိုပၝနဲႛပေၝ့နော်။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်။ အရင့်အရင်ိံစ်ြကာလတေတြုန်းကတော့ အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲ နီးလာရင် ပရိသတ်တြေ လပ်ြလပ်ြရြားရြား မုန်ႛ ဖုတ်စား (အဲလေ … ယောင်လိုႛ) စိတ်ဝင်တစား ရြိတတ်ုကပေမယ့် ဒီကိံစ်ြမြာတောူ့ပည်သူတေခြမဵာ စိတ်ဝင်စား အားမယ် မဟုတ်ဘူးလိုႛ ဂဵာနယ်လစ်ကိုကို တက်ြဆနေမိသဗဵ။ ဘယ်လိုဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ လောင်စာဆီစေဵိးံနြ်းက တာဝတိံသာကို ရောက်၊ ကုန်စေဵိးံနြ်း ဂရပ်မဵဉ်းက သိုကားမင်းဖင်ကို ဆောင့်နေတဲ့အခၝကဵတောူ့ပည်သူတေခြမဵာ စားဝတ်နေရေး ခဵားရဟတ်ဋ္ဌကီးထဲမြာ ခဵာခဵာလည် မူးနောက်္ဘပီး ခေၝင်းမဖော်အာုးကလိုႛပၝ။ နောက်ထပ် စိတ်မ၀င်စားအားတဲ့ အခဵက်က ဒီလိုပၝခင်ဗဵ။ူပည်သူတေခြမဵာ အသုံးမကဵတဲ့ စစ်အစိုးရအပေၞ မကေဵနပ်တဲ့အေုကာင်း စက်တာဘာမြာ ဆိံ္ဋူပမိုကတယ်လေ။ အဲဒၝကို အ္ဘငြိးထား္ဘပီး နအဖစစ်ခြေးတေကြ လိုက် ကိုက်နေတော့ေူပးသူေူပး၊ လြားသူ လြား၊ ပုန်းသူ ပုန်း၊ ရြောင်သူ ရြောင်၊ စစ်ေုကာရေးရောက်သူ ရောက်၊ ထောင် ထဲဝင်သူ ၀င်၊ မသေမရင်ြနဲႛ မီးရႚိခြံရသူ ခံရ၊ ပုဇန်ြတောင်ခေဵာင်းထဲ မေဵာသူ မေဵာနဲႛ ယောက်ယက်ခတ် နေုကတာ လည်း ပၝတာပေၝ့။ နောက်ဆုံးတခဵက်ကတော့ အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲ စင်ူမင့်ပေၞ မဵက်ြိာံေူပာင်ေူပာင်နဲႛ အရက်ြမရြိ တက်လ္ဘာပီး ဆုခဵီူးမငြ့်မယ့် လူသတ်ကောင် ကေဵာ်ဆန်းရႚဲ သက်ြခဵာပၝဒမဵက်ြိာံကို မုကည့်ခဵင်ုကလိုႛပဲူဖစ်ပၝတယ်။ အကယ်ဒမီဆု ပေးပြဲမြာ တော်ရမ်းတြေ မိန်ႛခနြ်းခေဋ္ဋမယ့် ကေဵာ်ဆန်းလေကို နာုးကာူးပင်းကပ်္ဘပီး တီဗီပြိတ်ထာုးကမြာကို ဋ္ဌကိတြင်ူမင် ယောင်နေမိတာလည်း ပၝပၝတယ်။ အဲဒီလို အေုကာင်းတရားတြေေုကာင့် နေူပည်တော်မြာ သြေးစနြ်းလက်တေနြဲႛ ပေး အပ်မယ့် အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲကိုပည်သူတြေ စိတ်ဝင်စားမယ်မဟုတ်ဘူးလိုႛ ဂဵာနယ်လစ်ကိုကို ပြဲဋ္ဌကိသြုံးသပ်ခဵက်ကလေး ပေးမိူခင်ူးဖစ်ပၝသဗဵ (အောက်ေုကးစားသြားရင်တော့ အလေဵာ်ူပန်မတောင်းနဲႛနော် … အဟဲ)။ ဒၝ့အူပင် အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲဋ္ဌကီး ကိုယ်ိံက်ြကိုယ်က စိတ်ဝင်စားခဵင်စရာ အေုကာင်းမရြိတာလည်း ပၝတယ် ခင်ဗဵ။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ နအဖခေတ် အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲဆိုတာက ဂဵာနယ်လစ်ကိုကိုတိုႛ ငယ်စဉ်တောင်ကေဵိးံပ်ြခေဵးတြဲလောင်းဘ၀က အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲတေနြဲႛ ကန်ြပဲယားလုပ်ရင် နံႛသာဆီနဲႛ အီးလို အကြာဋ္ဌကီး ကြာနေလိုႛပၝ။ ဟိုယခင် အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲတေဆြိုတာက ဇာတ်ကားတြေ ရာခဵီတဲ့အထဲက ရြေးခဵယ်္ဘပီး ပေးတာဆိုလေတော့ တိုက်ရိုက်လငြ့်တဲ့ ရေဒီယိုနားထောင်နေရင်း ရင်ခုန်ရလနြ်းလိုႛ ရူးမြာပဲ ဆိုသလိုဖစ်ခဲ့ရတာပေၝ့။ ဇာတ်ကားတေကြ လည်း ကောင်း၊ သရုပ်ဆောင် တေကြလည်း တော်ဆိုတော့ ဘယ်သူရမယ်ဆိုတာကို မနြ်းလိုႛ မလယ်ြဘူးခင်ဗဵ။ အဲဒၝ ကို ယုံကည်မလြန်ြက္ဘဲပီး လောင်းေုကးထပ်မိလိုႛကတော့ အာဋ္ဌကီးနဲႛ စပၝးပြဲလို ဟက်တက်ဋ္ဌကီးကြဲမြာ သေခဵာတယ်ခင် ဗဵ (၅ဂိုး-၁ဂိုးတဲ့ဗဵာ)။ ဆိုလိုတာကတော့ ဟိုယခင့်ယခင်ကာလတေကြ ဇာတ်ကားတြေ အမဵားဋ္ဌကီးထဲမြာ အဋ္ဌကိတ်အနယ် ယဉ်္ဘြပိင်ြရတာူဖစ်္ဘပီး ဘယ်သူရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ခန်ႛမနြ်းရခက်လိုႛ ရတဲ့အကယ်ဒမီဆုက တန်ဖိုးရြိတယ်လိုႛေူပာခဵင် တာပၝ။ အခုခေတ် နအဖလူသတ်အစိုးရက ကဵင်းပတဲ့ အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲတေကြတော့ - (၁) ပေးမယ့်ဆုအမဵြိးအစားက လက်ဆယ်ခေဵာင်းကေဵာ်္ဘပီး ရုံတင်တဲ့ ဇာတ်ကားက တိံစ်ြလုံးမြ လက်ဆယ်ခေဵာင်း မူပည့်တာတိုႛ (အဋ္ဌကိတ်အနယ် ယဉ်္ဘြပိင်ြရတဲ့ သဘောပေၝ့နော်)၊ (၂) ဆုပေးဖိုႛ လဵာထားတဲ့ မင်းသားက ရောက်မလာဘဲ စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်မြာ အ ရက်ထိုင်သောက်နေလိုႛ ပြဲမစိုံင်သေးဘဲ လိုက်ရြ္ဘာပီး သြားခေၞရတာတိုႛ (ဆုပေးပြဲကို တန်ဖိုးထားတဲ့ သဘောပေၝ့ နော်)၊ (၃) ပေၞလစီကားရိုက်တဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတေကြိုသာ အလညြ့်ကဵ ဆုပေးတာတိုႛ (အရည်အခဵင်း အစစ်အမန်ြပေၝ့ နော်)၊ (၄) ဆုရတဲ့သူ နာမည်ကို မေုကညာရသေးခင် ကင်မရာမင်းတေကြ ဆုရမယ့် မင်းသားမင်းသမီးရြေႚ ဋ္ဌကိရြောက်္ဘပီး ဓာတ်ပုံတြေ တဖဵပ်ဖဵပ် ရိုက်နေတာတိုႛ (တော်တော် ရင်ခုန်စရာ ကောင်းတယ်နော်)၊ (၅) အကယ်ဒမီလိုခဵင်တဲ့ သရုပ် ဆောင်တေကြ ဆုရြေးခဵယ်ရေးအဖြဲႛ၀င် လူဋ္ဌကီးမင်းတေအြိမ်ကို နောက်ဖေးပေၝက်က၀င်္ဘပီး အုန်းပြဲ၊ ငက်ြပေဵာပြဲနဲႛ ကန် တော့ရတာတိုႛ (လူဋ္ဌကီးသူမတေကြို ရို သေလေးစားတဲ့ သဘောပေၝ့နော်) … အဲသလိုဖစ်ရပ်မဵြိးစုံနဲႛ စြဲဆောင်အား ကောင်းလန်ြလနြ်းလိုႛ တန်ဖိုးကဵဆင်း္ဘပီး ပရိသတ်စိတ်မ၀င်စားတော့တာလည်း ပၝမယ်ထင်တယ်ခင်ဗဵ ဟဲ ဟဲ …။ ဒၝပေမယ့် ဘယ်လိုပဲူဖစ်ူဖစ်လေ … တိံစ်ြပတ်လုံး ဇာတ်ကားတကားထဲ ရုံတင်္ဘပီး အဲဒီကားကိုပဲ ဆုပေး မယ်ဆိုရင်လည်း တက်ယူမယ့်သူတေကြ အမဵားသားဆိုသလို တြေႛနေရတယ်ခင်ဗဵ။ အံမယ် … အံမယ် …ုကည့်စမ်ုးကည့်စမ်း ဒၝရိုက်တာမောင်မဵြိးမင်း(ရင်တငြ်ူးဖစ်)ဋ္ဌကီးတယောက် ဂဵာနယ်တစောင်ထဲမြာ ရင်ခုန်စြာေူပာုကားနေပုံမဵား ဒီလို ဒီလို … "အကယ်ဒမီဆိုတာကိုတော့ အကယ်ဒမီရြေးခဵယ်ရေး ဘုတ်အဖြဲႛက ထူးခဋ္ဋန်တဲ့အိုံပညာရင်ြတေကြို ပေး တဲ့ ဆုလိုႛပဲ အဓိပဍ္ဎၝယ်ဖငြ့်ခဵင်ပၝတယ်…" တဲ့။ ဟော … နာနာလေး (နိံ္ဋလိင်ြကို ဂဵာနယ်လစ်ကိုကို ခဵစ်စိုံးခေၞသံ) ရဲႚ ရင်ခုန်သံကိုလည်ုးကားခဵင်သေးလား ခင်ဗဵ။ (မဵြိးမဵြိးခိုင်နဲႛ အတင်းတုပ်တဲ့ အခေထြဲက မဟုတ်ဘူးနော်)။ နာနာလေးကလည်း ဂဵာနယ်ထဲမြာ ရင်ခုန်ထားတာ က ဒီလို ဒီလို … " နိံ္ဋာ့ကို ပရိသတ်တေကြ ရစေခဵင်တယ်ဆိုတာနဲႛတင် နိံ္ဋာဝမ်းသာလပြၝ္ဘပီတဲ့။ တောင်သမန်သင်္စာ ကားနဲႛ ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း နိံ္ဋာ အတိုင်းထက်အလနြ် ၀မ်းသာမိမြာပၝ …" တဲ့။ ဟော … ပ္ဘိုပီးထူးခားနေပုံက အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲ မကဵင်းပခင်မြာပဲ ရုပ်ရင်ြအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦူးမင့်သိန်းဖေကိုမန်မာ့ရုပ်ရင်ြလုပ်ငန်းက အမတ်ြတရဂုဏ်ူပြ အကယ်ဒမီရေစြင်ရုပ်ဆု ပေးအပ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းပၝပဲ။ အဲဒီသတင်းကို ဖတ်ရတော့ ဒီိံစ်ြဆုပေးမယ့် ရေစြင်ရုပ်တေကြို ဦးလဒြင်နဲႛသားမဵားဆိုင်မြာ သြားအပ်တာ ဆိုင်က အရုပ်တရုပ် အပို ပေးလိုက်လိုႛမဵားလား၊ ဒၝမမြဟုတ် ဦူးမင့်သိန်းဖေတယောက် နအဖသက်တမ်းတလ္တွောက် စစ်ခြေးတသိုက်ကို "အဖၝး"တာဝန် ကေဵဏ္ဍပန်ြခဲ့လိုႛပဲလားလိုႛ ဂဵာနယ်လစ်ကိုကို အတြေးလန်ြနေမိလေရဲႚ။ ဒၝပေမယ့် ဒီ့ထက်ဒီ ပ္ဘိုပီးထူးခားနေတာက္ဘပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ရေဝြၝရောင် အရေးတော်ပုံအ္ဘပီးမြာ "ူမန်မာူပည်သူလူထုဋ္ဌကီးက ပေးအပ်ခဵီူးမငြ့်တဲ့ အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲ" ကို ဂဵာနယ်လစ်ကိုကို အထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲႛ တက်ရောက် သတင်းယူခဲ့ရတာပဲူဖစ်ပၝတယ်။ အဲဒီဆုပေးပြဲဋ္ဌကီးမြာူမန်မာူပည်သူလူထုဋ္ဌကီးက တခမ်းတနား ဂုဏ်ူပပြေး အပ်ခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီဆုရင်ြက ရြားရြားပၝးပၝိးံစြ်ဦးပဲ တြေႛခဲ့ရသဗဵာ။ သရုပ်ဆောင်တြေ အမဵားဋ္ဌကီး ရြိတဲ့အထဲကိံစြ် ယောက်ကိုပဲ ရြေးခဵယ်္ဘပီး ပေးအပ်တာဆိုတော့ ဆုရတဲ့ အကယ်ဒမီဆုရငြ်ိံစြ်ဦးကိုယ်စား ဘယ်လောက်တောင် ဂုဏ် ယူစရာ ကောင်းလိုက်လေမလဲဆိုတာ စဉ်းစာုးကည့်ပေၝ့နော်။ ဆုရငြ်ိံစြ်ဦးက ဘယ်သူတေလြဲဆိုတော့ စက်တင်ဘာ ရေဝြၝရောင်တော်လနြ်းရေးဋ္ဌကီးအတငြ်းမြာ လူထုနဲႛတသားတည်း ရပ်တည်္ဘပီး ရြေႚဆုံးကနေ တက်တက်ရကရြကြ တိုက်ပြဲ ၀င်ခဲ့တဲူ့ပည်သူႛအခဵစ်တော် လူရင်ြတော် ဇာဂနာနဲႛ နာရေးကူညီမအြသင်း ဥက္ကဌ ရုပ်ရင်ြမင်းသား ကေဵာ်သူတိုႛပဲူဖစ်ပၝသဗဵ။ သူတိုႛိံစ်ြယောက်လည်း ဆုတက်ယူရော တီးလိုက်ုကတဲ့ ပရိသတ်လက်ခုပ်သံတေဗြဵာ၊ ဘ၀ဂ်အထိအောင် ညံ ဆိုသလိုပၝပဲ။ူပည်သူတေကြ ဖက်ရမ်းနမ်းရတြ် ဂုဏ်ူပလြိုက်ုကတာမဵားဆို ကိုဇာဂနာနဲႛ ကိုကေဵာ်သူတိုႛိံစြ် ယောက် အသက်တောင် ဘယ်လိုရရြမနြ်း မသိအောင်ူဖစ်ခဲ့ရသတဲ့ဗဵာ။ အဲသလိုပည်သူႛအကယ်ဒမီပေးပြဲဋ္ဌကီးကို တက်ရောက်္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဂဵာနယ်လစ်ကိုကိုအနေနဲႛ နေူပည်တော် လူသတ်အစိုးရရဲႚ သြေးစနြ်းလက်တေနြဲႛ ပေးအပ်မယ့် ဆုပေးပြဲဋ္ဌကီးမြာ သြေးစနြ်းလက်တေကြို လက်ဆြဲိံတ်ြဆက်္ဘပီး ဘယ်သူတြေ ဆုတက်ယူုကမလဲ ဆိုတာကို စောင့်ုကည့်ခဵင်နေမိပၝတော့တယ်။ သေခဵာတာကတောူ့ပည်သူႛအကယ်ဒမီ ဆုရ္ဘပီူးဖစ်တဲ့ ကိုဇာဂနာနဲႛ ကိုကေဵာ်သူတိုႛ ပၝမြာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုေုကးကေဵာပေး္ဘပီး လောင်းေုကးထပ်ခဵင်နေမိ တာပၝပဲ။
ရမ်ဘိုနဲႚ ရုပ်ရင်ြရုံထဲက ခဵစ်သော ဗမာူပည် မီးလ္တွံေူမခြေး ဇန်န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မစံတိုႚရေ ငၝတို ရမ်ဘို ဒီနေႚ သြာုးကည့်ုကတယ်။ သောုကာနေႚက ရုံတင်တာပၝ။ ဗမာူပည်ထဲကို ခရစ်ယန်အဲန်ဂဵီအို အဖြဲႚ၀င်တေကြို ၀င်ကယ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပၝ။ ဗမာသရုပ်ဆောင်တြေ ပၝတယ်။ ဒီကာူးပီးမြ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်ူးဖစ်ပေမယ့် ပထမဆုံး ကား မစမီ လက်ရြိုံင်ငံရေးအခင်းအကဵင်းနောက်ခံ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းက ပုံတြေူပတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတိုႚ ဆိံ္ဋူပနေတာတြေ။ စီအဲန်အဲန်ကူပတဲ့ စစ်သားတြေ ကေဵာင်းသားကြိုိံပ်စက်တာတြေ အကုန်ူပတယ်။ မိတ်ဆေတြယောက်ကဆိုရင် ရုံရြေႚမြာ လက်မတ်ြဝယ်ူပီးကို လာသမ္တွ ဗမာတေအြကုန် သူဝယ်ူပတယ်။ ရုံထဲမြာ ဗမာတြေ အူပည့်ပဲ တဲ့။ စစ်သားတယောက်ကို သတ်လိုက်ရင်၊ လူတေကြ ကလေးတေလြိုပဲ။ အကုန် လက်ခုပ်တီုးကတာ၊ သူတိုႚ လုပ်ခဵင်တာတေပြေၝ့ဟာ။ ငၝလည်း စစ်သားတေကြ ကရင်မိသားစုတေကြိုိံပ်စက်တာတြေ ရိုက်ူပထားတော့၊ အခုနယ်စပ်မြာ ရြာပုန်းရြာရြောင် ကရင်မိသားစုတေရြဲႚ တကယ့်အူဖစ်အပဵက်တေမြိုႚ အင်မတန်သနားဖိုႚ ကောင်းပၝတယ်။ူပကက်ြတေကြတော့ ရက်စက်တယ်။ သြေးသံတရဲရဲပဲ။ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းခန်းကတော့ စစ်သားတေကြို ရမ်ဘိုတိုႚက အူပတ်ေူခမနြ်း သတ်ပစ်တာမိုႚ၊ တကယ်ဆို ၀မ်းသာရမြာ။ ငၝတော့ ၀မ်းမသိာိုံင်ဘဲ မဵက်ရည်တောင် ကဵမိပၝတယ်ဟာ။ စစ်သားတေကြို သနားလိုႚ မဟုတ်။ သနားစရာလည်း မရြိ။ ဒၝပေမဲ့ ကိုယ့်အူဖစ်က ဗမာစကားေူပာနေတဲ့ ကိုယ့်ဗမာတေကြို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ူပနေတာကို လူမဵြိူးခားတေဘြက်က အားပေးရမလိုဖစ်နေတာကိုး။ ကမ္တာမြာ ဗမာအေုကာင်းရိုက်ရင် ရိုက်စရာတြေ တပုံကီး၊ ဗမာက ကမ္တာမြာ အယဉ်ကေဵးဆုံးလူမဵြိးဆိုတာပဲ ရိုက်မလား။ အရမ်းလတြဲ့ ဗမာ့ရေေူမတောတောင်အလကြိုပဲ ရိုက်မလား။ သယံဇာတတေကြိုပဲ ရိုက်မလား၊ ထောင့်မဵြိးစုံကရိုက်ိုံင်ပေမယ့်၊ မတ်ြတမ်းတင်မယ့် အတင်ခံရတော့ ကိုယ့်အခဵင်းခဵင်ူးပန်သတ်၊ြိံပ်စက်တဲ့ လူမဵြိး၊ ကိုယ့်သာသနာစော်ကားတဲ့ လူမဵြိးလိုႚ (လက်တဆုပ်စာ သူတိုႚေုကာင့်) ရုပ်ရင်ြတောင် ရိုက်ရတဲ့ အူဖစ်ကိုး။ သတ်လိုက်တာလဲ ရက်ရက်စက်စက်ပၝပဲ၊ ငၝ့မြာ ရုပ်ရင်ြရုံထဲကူပန်ထက်ြလာတဲ့အထိ ငၝတိုႚဗမာူပည်သူတေရြဲႚအူဖစ်ကို စဉ်းစာူးပီး မဵက်ရည်မဆည်ိုံင်ဘူး။ နောက်တခေၝက်ူပန်မုကည့်ခဵင်တဲ့ ရုပ်ရင်ြလိုႚ မတ်ြတမ်းတင်လိုက်ပၝတယ်၊ ခဵစ်သောမီးလ္တွံေူမခြေး
Reactions: မောင်စစ်မင်း (ူမန်မိာိုံင်ငံ တေးရေးဆရာမဵား) - ငၝသည် တော်လန်ြရေး
ငၝသည် တော်လန်ြရေးမောင်စစ်မင်း (ူမန်မိာိုံင်ငံ တေးရေးဆရာမဵား)ဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ငၝတိုႚသည် ငၝတိုႚ၏ိံလြုံးသားမဵားအား မေုးကည့်၏ငၝတိုႚိံလြုံးသားမဵားကေူဖ၏ ငၝသည် တော်လန်ြရေး ငၝတိုႚသည် ငၝတိုႚ၏ အသြေးအသားမဵားအား မေုးကည့်၏ငၝတိုႚ၏ အသြေးအသားမဵားကေူဖ၏ ငၝသည် တော်လန်ြရေး ငၝတိုႚသည် ငၝတိုႚခိံ္ဇာအား မေုးကည့်၏ငၝတိုႚ၏ ခိံ္ဇာကေူဖ၏ ငၝသည် တော်လန်ြရေး
Reactions: ကဗဵာဆရာစောဝေ အင်းစိန်ထောင်သိုႛေူပာင်းရြေႛခဵပြ်ြေိာံင်ခံရ၊ စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းက တခုခု တုံႛူပန်သင့်သည်ဟုေူပာဆိုမမြဵားရြိ
ကဗဵာဆရာစောဝေ အင်းစိန်ထောင်သိုႛေူပာင်းရြေႛခဵပြ်ြေိာံင်ခံရ၊ စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းက တခုခု တုံႛူပန်သင့်သည်ဟုေူပာဆိုမမြဵားရြိမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ူပည်ထဲရေးဝန်ဋ္ဌကီးရုံးတငြ် ခေၞယူစစ်ဆေူးခင်းခံနေရသူ ကဗဵာဆရာကိုစောဝေသည်ူပီးခဲ့သည့် သောုကာနေႛတငြ် အင်းစိန်အကဵဉ်းထောင်သိုႛေူပာင်းရြေႛခဵပြ်ြေိာံင်ခံရသည်ဟု အကဵဉ်းဦးစီးဌာနမြ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကေူပာူပသည်။ ကိုစောဝေအား ရာဇ၀တ်သားမဵာိးံငြ့်မဟုတ်ဘဲ၊ိုိံင်ငံရေး အကဵဉ်းသားမဵားရိသြည့် အဆောင်ဘက်တငြ် ထိန်းသိမ်းထာူးခင်ူးဖစ်သည်ဟု အဆိုပၝ အမည်မဖော်လိုသူ ၀န်ထမ်းက ဆက်လက်ေူပာုကားသည်။ အာဏာပိုင်တိုႛက ကိုစောဝေအာူးပီးခဲ့သည့် အဂဿၝနေႛ (ဇန်န်ဝၝရီ ၂၂ရက်နေႛ)တငြ် ခေၞဆောင်သြားခဲူ့ခင်ူးဖစ်သည်။ အခဵစ်ကဗဵာတင်ြဖော်ူပခဲ့သည့် အူငင်းပြားဖယ်ြကဗဵာတစ်ပုဒ်ေုကာင့် စစ်ဆေးမေူးမန်းရန် ခေၞဆောင်သြာူးခင်ူးဖစ်သည်။ "အခုလို စာရေးဆရာတယောက်ကို ခိုင်လုံတဲ့ အေုကာင်းမရြိဘဲ၊ တစုံတရာ နစ်နာစေလိုတဲ့ ရည်ရယ်ြခဵက်နဲႛ လုပ်ုကူံခင်း ခံလိုက်ရတာကိုမန်မာစာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းက တခုခု တုံႛူပန်ေူပာဆိုသင့်ပၝတယ်။ အားလုံးက ညီညီညတ်ြညတ်ြနဲႛူငိမ်ူးငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း တောင်းဆိုကရင် အခုလို နားလည်မလြဲမြားမတြခုကနေ ကေဵာ်လြာိးိုံင်မြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဆရာဦးဝင်းတင်ကလည်း ခုထိ ထောင်ထဲမြာ။ ထောင်ထဲမြာ ဆုံးပၝးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာုကီးတေဆြိုတာလည်း မောင်သော်က အပၝအ၀င် မနည်းတော့ပၝဘူး။ ကိုဇော်သက်ထြေးတိုႛတုန်းကလည်း ထောင်ဒဏ်တြေူပင်ူးပင်းထန်ထန် ခဵမတြ်ူခင်း ခံခဲ့ရတာတေရြိတယ်။ူပန်လည်လတြ်ေူမာက်လာတဲ့ စာရေးဆရာ၊ စာနယ်ဇင်း ဆရာတေကြလည်း အူပင်မြာ တစုတစည်းတည်း ရြိနေဆဲပၝပဲ။ ဒီတော့ အခုလို ကိင်္စကို သက်ဆိုင်ရာကူငိမ်ူးငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း သဘောထာုးကီုးကီးနဲႛ ရငြ်းလင်းမပေးရင်၊ စာနယ်ဇင်း လတ်ြလပ်ခငြ့်နဲႛ တရားမ္တွတစြာ တရားရင်ဆိုင်ခငြ့် တစစ နည်းပၝးလာတဲူ့ပည်တငြ်းက စာနယ်ဇင်းတေမြာ စာပေ အိုံပညာတြေ ဆက်လက် ရေးသားနေုကဖိုႛ ဆိုတာ အလန်ြခဲယဉ်းတဲ့ အရေးကိင်္စူဖစ်နေူပီ …" လိုႛူပည်တငြ်းက စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းတငြ်းက အထိမ်းသိမ်းခံဖူးသူ စာပေသမားတဦးက မိုးမခ သိုႛ ထုတ်ဖော်ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။
Reactions: ဘယ်သူတြေ ဘာမဵား ဘလော့ဂ်နေသလဲ -ိံစ်ြသစ်ကူိးုိံင်ငံသား
ဘယ်သူတြေ ဘာမဵား ဘလော့ဂ်နေသလဲ -ိံစ်ြသစ်ကူိးုိံင်ငံသားမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ိုိံင်ိးုိံင်းစနေ၊ိံစ်ြသစ်ရာသီ၊ ၂၇-၁-၂၀၀၈http://nineninesanay.blogspot.com/2008/01/blog-post_27.htmlုကက်ဖတေကြို သင်းကပ်ြတဲ့အေုကာင်ုးကားဖူးပၝသလား။ ဘယ်လို၊ ဘာေုကာင့် စီရင်ရတယ် ဆိုတာကိုတော့ မနေႛတုန်းကိုိံင်ိးုိံင်းစနေရဲႛိံစ်ြသစ်ရာသီ ဆောင်းပၝးမြာ ရေးထားပၝတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖယြ် အေုကာင်းအရာကို ကလောင်သက်ြသက်ြနဲႛ ဟာသြေိာူံပီး မတ်ြတမ်းတင်ထားပၝတယ်။ တနေႛတုန်းကလည်း ဒီခေၝင်းစဉ်နဲႛပဲ တစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ပၝသေးတယ်။ တရုပ်ိံစ်ြသစ်ကူးကာလ ငယ်စဉ်ဘ၀ အတြေႛအဋ္ဌကြံတေကြိုပဲ ရေးဖြဲႛထားတာပၝ။ ဒၝေုကာင့် ခေၝင်းစဉ်တစ်ခုတည်း ပေးထားပုံရပၝတယ်။ိုိံင်ိးုိံင်းစနေဟာ ထိုင်ဝမ်ိုိံင်ငံမြာ ကေဵာင်းတက်နေသူဖစ်ပၝတယ်။ သူႛအရေးအသားတေမြာ အဂဿလိပ်ဘာသာအူပင်၊ တရုပ်ဘာသာနဲႛဖော်ူပတဲ့ စာနယ်ဇင်းတေကြို ကိုးကားထားပၝတယ်။ ဘာသာစကားကို တစ်ခုထက်ပိုပီး တတ်ကဵမြ်ူးခင်ူးခင်းဟာ ဘလော့ဂ်တစ်ယောက်အတကြ် အားသာခဵက်တစ်ခုဖစ်တယ်ဆိုတာ သူႛဘလော့ဂ်က သက်သေပၝပဲ။ိုိံင်ိးုိံင်းဟာ ထိုင်ဝမ်မြာကေဵာင်းသြားတက်နေသူမိုႛ တရုပ်မလေးလိုႛ ယူဆရပၝတယ်။ သိုႛပေမဲ့ အခုတလော သူႛဘလော့ဂ်မြာ လားဟူတိုင်းရင်းသားတိုႛရဲႛ ကောက်သစ်စားပြဲ၊ လားဟိူံစ်ြသစ်ကူး ဓလေ့တေအြေုကာင်း သူႛဘလော့ဂ်မြာ ဖတ်ရတာမိုႛ သူဟာ လားဟူတိုင်းရင်းသူလည်ူးဖစ်ိုိံင်ပၝတယ်။ ဒီနေႛူမန်မာူပည်သား ဘလော့ဂၝတေထြဲမြာတောိုိံ့င်ိးုိံင်းရဲႛ ရေးအားက အကောင်းဆုံူးဖစ်မြာပၝ။ူပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြက ရက်ပေၝင်း ၃၆၀ ကေဵာ်ပဲရိပြေမယ့် သူကတော့ ဘလော့ဂ်ပေၝင်း ၄၆၀ ကေဵာ် တင်ခဲ့ပၝတယ်။ သူႛဘလော့ဂ်ဟာ သတင်းပေးတဲ့ဘလော့ဂ်မဟုတ်ဘဲ၊ အခဵက်အလက်တေပြေးတဲ့ ဘာသာူပန်စာပေ၊ ရသစာပေတေပြၝတဲ့ ဘလော့ဂ်ူဖစ်ပၝတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်နဲႛ တူနေပၝတယ်။ လင်းလက်ုကယ်စင်၊ လူမဵြိးံငြ့်ိုိံင်ငံသား၊ ၂၇-၁-၂၀၀၈http://linletkyalsin.blogspot.com/2008/01/blog-post_27.html "ငၝတိုႛစကဿာပူမြိာိုံင်ငံသာူးဖစ်ခဵင်တယ်ဆိုတော့ မင်းက ဘာအရည်အခဵင်း ရိလြိုႛလဲ။""ကဵနော် မိုးမခမြာ အယ်ဒီတာ လုပ်နေပၝတယ်။""မေးတာေူဖပၝ။"(ကာတနြ်း ရန်လိုကြဵဲ) စကဿာပူအေူခစိုက် လင်းလက်ုကယ်စင်ဟာူမန်မာဘလော့ဂ်လောကမြာ ထင်ရြားသူတစ်ဦူးဖစ်ပၝတယ်။ ၁၉၈၈ လူထုလပ်ြရြားမအြူပီး မြေးဖြားလာသူ၊ူမန်မာူပည်အရေးကို စိတ်ဝင်စားသူဖစ်ေုကာင်း သူႛဘလော့ဂ်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ လူမဵြိးံငြ့်ိုိံင်ငံသား ဆောင်းပၝးမြာ စကဿာပူရောက်ူမန်မာူပည်သားတေအြေုကာင်း တြေႛရမြာပၝ။ူမန်မာူပည်သားတခဵြိႛဟာူမန်မိာုိံင်ငံသားအူဖစ်ကို စနြ်ႛလတြ်ူပီး စကဿာပိူုိံင်ငံသားအူဖစ် ကူးေူပာင်းနေုကပၝူပီ။ ဘလော့ဂၝတေကြ ဒီအေုကာင်းအရာကိုပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြကတည်းက ဆြေးြေိံး ရေးသားခဲု့ကတာ သတိထားမိပၝတယ်။ မနေႛတုန်းက လင်းလက်ရဲႛဆောင်းပၝးမြာတောူ့မန်မိာုိံင်ငံသားအူဖစ် စနြ်ႛလတြ်ူခင်းနဲႛ ပတ်သက်ူပီး သူႛအူမင်တေကြို ဖငြ့်ခဵထားပၝတယ်။ ဒီဆောင်းပၝးကူမန်မာူပည်သားတြေ ဘာေုကာင့်ိုံင်ငံသာူးဖစ်မကြို စနြ်ႛနေုကသလဲ၊ စကဿာပိူုိံင်ငံသာူးဖစ်သြားရင် အကဵြိးဆက်က ဘာလဲ၊ ဆိုတဲ့ မေးခနြ်းတေကြိုေူဖထားပၝတယ်။ ပိုမိုသိရိလြိုတယ်ဆိုရင်တော့ Google မြာ ရြာလိုႛရပၝတယ်။ လယ်ြကူအောင်ဆိုရင် "စကဿာပိူုိံင်ငံသား" ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံူးပီး ရြာရုံပၝပဲ။ူမန်မာဘာသာနဲႛ ရြိာုိံင်ပၝတယ်။ လူအတော်မဵားမဵားရဲႛအူမင်တေကြို တြေႛိုိံင်ပၝတယ်။ သူတိုႛူငင်းခုံ ဆြေးြေိံးထားတာတြေ၊ စကဿာပူရောက်ူမန်မာူပည်သားတေရြဲႛဘ၀ကို မိုးမခပရိသတ်မဵား စိတ်ဝင်စာုးကမြာ သေခဵာပၝတယ်။ ရြာဖေတြဲ့အခၝ သတိထားရမြာ ၂ခု ရိပြၝတယ်၊ Google ကနေရြာမြ ရပၝတယ်၊ yahooမြာရြာလိုႛ လုံးဝ မရပၝ။ စာလုံးပုံစံကိုလည်း Zawgyi-Oneသုံးပၝ။ အကောင်းဆုံးကတော့ လင်းလက်ရဲႛဆောင်းပၝး ပထမပိုဒ်မြာပၝတဲ့ စကဿာပိူုိံင်ငံသား ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကော်ပီကူးပီး သုံးပၝ။ ကဵနော်တိုႛ မိုးမခမြာ အခုဖတ်နေရတဲ့ စာလုံးပုံစံက BITူဖစ်တဲ့အတကြ်၊ အသုံးနည်းတဲ့အတကြ် အခဵက်အလက် အမဵားဋ္ဌကီး မရိုိံင်ပၝ။